Xalaal Safarka Montreal - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Safarka Xalaal ee Kanada
Xalaal Safarka Montreal
Xaaladda Covid-19 ee Kanada
Montreal waa magaalada ugu weyn gobolka Quebec ee Kanada. In kasta oo Magaalada Quebec ay tahay caasimadda, Montreal waa Xarunta Dhaqanka iyo Dhaqaalaha, iyo meesha ugu weyn ee laga soo galo gobolka. Iyada oo leh 1.7 milyan oo muwaadiniin ah oo ku nool magaalada iyo 4 milyan oo ku nool aagga magaalada, Montreal waa magaalada labaad ee ugu weyn Kanada, iyo magaalada ugu weyn ee ku hadla luuqadda fransiiska ee Ameerika. Wali, rubuc ka mid ah dadku waxay ugu hadlaan Ingiriis sidii hooyo hooyo, inta badan Francophones -ku waxay ku hadlaan Ingiriis. Old Montreal waxay leedahay dhaxal wakhtiyadii gumaysiga. In kasta oo ay tahay magaalo weyn, Montreal waxay siisaa fursado nolosha bannaanka, iyo daawashada halyeeyga Montreal Canadiens kooxda xeegada barafka.
Xaafadaha min galbeed ilaa bari:
Khariidadaha degmooyinka Montreal
Dhismayaasha dhaadheer, dukaamaysiga, matxafyada, iyo Parc du Mont-Royal.
Jiida hore ee taariikhiga ah ee webiga Old Town iyo Old Port waxay maamushaa inay lahaato dareen xoog leh inkasta oo ay ku habsadeen kooxo badan oo dalxiisayaal ah.
Makhaayadaha, dukaamada, maqaayadaha, makhaayadaha ku dhow UQAM ee Quartier Latin, baararka khaniisiinta iyo naadiyada Le Village, iyo xaafadda fasalka shaqada ee Sainte-Marie.
Jasiiradaha Sainle Sainte-Helene iyo Île Notre-Dame iyo Montreal Casino.
Degmada Plateau Mont-Royal
Aag Trendy waqooyiga magaalada hoose iyo bariga Parc du Mont-Royal.
Bagels, makhaayadaha, makhaayadaha kafeega, Riyaal Tiyaatarka, iyo dukaamada.
Degmooyinka kale ee Montreal iyo magaalooyinka Montreal Island
Little Italy iyo suuqa Jean-Talon.
Xaddiga xagjirka anglophone ee Westmount iyo xaafadda soo socota ee Notre-Dame-de-Grâce.
Park Park, Jardiinooyinka dhirta.
Xaafada dhaqamada badan ee waqooyi-galbeed buurta.
Xaafada francophone-ka Upscale.
Oo ay ku jiraan kanaalka Lachine, Suuqa Atwater (waa qasab!), Qeexitaanka St. Henri, iyo goobta kulul ee kululaynta, Petite-Bourgogne.
Xaafad degan oo leh cunno soo ifbaxeysa iyo howlo webiga jiinkiisa ah.
Meel kale oo jasiiradda ah
qaybta galbeed ee jasiiradda Montreal. Badiyaa waa xaafad ay degan yihiin magaalada Montreal. Waa meesha Montreal Pierre Elliott Trudeau Airport iyo Jaamacadda McGill ee MacDonald Campus. Deganayaasha inta badan waxay ku hadlaan Ingiriisiga (ama "anglophones"), oo ka duwan inta badan dadka ku hadla Faransiiska ee degan inta kale ee Montreal (marka laga reebo Westmount). (Qiyaastii 55% dadku waa anglophone, 20% waa francophone, 25% waa "kale".)
oo ka kooban degmooyinka Montreal ee Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles iyo Anjou, iyo Magaalada Montréal-Est
Jasiirad ku taal Wabiga St. Lawrence oo ah meesha ugu saraysa ee la mari karo, Montreal waxay ahayd goob istiraatiiji ah ilaa intii aanay iman reer Yurub Kanada. Magaalo Iroquoian ah oo horumarsan oo la yiraahdo Hochelaga ayaa ku taal goobta Montreal ee maanta markii sahamiyaha Jacques Cartier markii ugu horreysay booqday 1535. Sannadkii 1642, magaalada yar ee Ville-Marie waxaa aasaasay Paul Chomedey, sieur de Maisonneuve. Isla markiiba waxay noqotay Xarunta ganacsiga dhogorta. Ka dib markii ay qabsadeen Ingiriiskii 1762 -kii, Montreal waxay ku hadhay (ilaa 1970 -meeyadii) magaalada ugu muhiimsan Kanada waxayna muddo kooban caasimad u ahayd gobolka 1840 -meeyadii.
Mamnuucidda iibinta aalkolada ee Maraykanka intii lagu jiray 1920-meeyadii iyo 1930-yadii ayaa Montreal ka dhigtay Mecca dadka madadaalo-doonka ah ee ka gudbaya New England iyo New York. Magaaladu waxay dhistay caadifad, haddana cayaar leh, warshadaha khamriga, burlesque, iyo waxyaabo kale oo xun. Sannadihii 1960 -meeyadii, waddo -cusboonaysiin magaalo oo ku taal Expo 67. Bandhigga Adduunka ee Montreal wuxuu keenay nidaam tareenka dhulka hoostiisa ah (métro) iyo jardiinooyin magaalo oo soo jiidasho leh waxaana loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah Carwooyinka Adduunka ee ugu guulaha badan. In ka badan 50 milyan oo soo -booqde ayaa isugu soo ururay Montreal intii lagu jiray xagaagan xusuusta leh. Ciyaarihii Olombikada ee 1976kii waxay ka tageen garoon aan caadi ahayn iyo horumar kale oo badan oo magaalada ah.
Furitaankii 'Saint Lawrence Seaway' sanadkii 1959, in kastoo aad loogu bogaadiyey inuu yahay koboc dhaqaale, waxay bilow u noqotay dhammaadka xukunka dhaqaale ee Montreal ee Kanada. Mar xadka kala-guurka ee u dhexeeya tareennada galbeedka iyo kuwa badda xambaara, Montreal waxay si aan fiiro lahayn u daawatay markii qaar ka mid ah ganacsigan ay u sii dhaqaaqeen dhanka galbeed, kana sii dageen badda hadda la safri karo, dekeddaha Ontario iyo harada Lake Superior. Dhaqdhaqaaqa gobanimada ee Quebec, oo bilaabay inuu uumi baxo 1960s, wuxuu sii qaboojiyay jawiga ganacsiyada Canada oo dhan, kuwaas oo badankood xaruntooda u wareejiyay Toronto.
Kaddib niyad jab dhaqaale 1980 -yadii iyo 1990 -meeyadii, Montreal waxay noqotay mid aad u ammaansan meesheeda Waqooyiga Ameerika iyo adduunka. Waxay weli tahay Xarunta Dhaqanka, Fanka, Farsamada Kombiyuutarka, Aerospace, Warshadaha Biyotech, iyo Warbaahinta dhammaan Kanada.
Waxaa la yiri Montréal waa magaalada kaliya ee aduunka ee qorraxdu ka dhacdo "koonfurta".
Montrealers waxay adeegsadaan jiheeye aan caadi ahayn, iyagoo webiga iyo buurta u adeegsanaya inay yihiin qodobbo muhiim ah. Markaad magaalada hoose joogto, wabiga St Lawrence waa “koonfur” buurta Royalna waa “woqooyi”; sameynta West Island iyo East End oo sax ku ah magacyadooda iyo jihooyinkooda. Tani waxay u egtahay inay jahwareeriso booqdayaasha maxaa yeelay dhamaadka “East” runti waa waqooyi iyo “South” Shore waa bari, oo St Lawrence River wuxuu kudhowaa waqooyiga-koonfurta meeshan.
Badi khariidadaha maxalliga ahi waxay u isticmaalaan heshiiskan sida waddooyinka waaweyn ee magaalada ku wareegsan. Tusaale ahaan, Autoroute 15 woqooyi dhab ahaantii wuxuu socdaa waqooyi-galbeed iyo Autoroute 40-bari wuxuu maraa waqooyi-bari.
Si loo adkeeyo xaqiiqadan, khariidada Montreal waxay muujin doontaa in "dhamaadka koonfureed" ee Victoria Bridge ay dhab ahaantii ka sii woqooyi tahay "dhamaadka woqooyi".
Cimilada Montreal waa jawi qoyan oo qoyan oo leh 4 xilli oo kala duwan. Magaalada waxay leedahay xagaa diiran - mararka qaarna kulul & qoyan - xagaaga, guud ahaan gu'ga iyo deyrta oo khafiif ah, iyo badanaa qabow & baraf qabow. Montreal waxay heshaa in ka badan 2,000 oo saacadood oo qorrax ah sanadkii. Roobku waa mid dhexdhexaad ah sanadka oo dhan, oo leh qiyaastii 2 mitir oo baraf ah xilli ciyaareedkiiba.
Xarunta Infotouriste de Montréal, 1255 rue Peel, xafiiska 100 (At rue Sainte-Catherine; metel Peel), lacag la'aan + 1-877-266-5687. Abriil 1-Maajo 7: 09: 09-17: 00; Meey 8-Oct 4: 09: 00-18: 00; Oktoobar 5-Mar 31: 09: 00-17: 00; Xidhan: Dec 25 & Jan 1. (la cusbooneysiiyay Jul 2015)
Montreal's Madaarka Pierre Elliott Trudeau )jid) 20. Waqtiga safarka madaarka ee ka imanaya Xarunta Magaalada waxay noqon kartaa ilaa saacad, taas oo ku xidhan taraafikada. Gegada dayuuradaha waxaa ka shaqeeya dhammaan shirkadaha waaweyn ee Kanadiyaanka iyo Maraykanka waana xarun weyn oo loogu talagalay Air Canada, Air Transat, Iyo WestJet. Waxaa jira duulimaadyo trans-maalinle ah oo aada ama ka yimaada (kuwa kale) London, Amsterdam, Paris, Geneva, Zurich, Athens, Doha, Frankfurt, Rome, Madrid, Lisbon, Munich, iyo Casablanca. Duulimaadyada trans-Pacific-ka way xadidan yihiin laakiin way sii kordhayaan. Air China waxay adeeg u haysaa Beijing, sidoo kale Air Canada waxay adeegyo siisaa Shanghai iyo Tokyo.
The taxi raacida iyo ka soo noqoshada magaalada hoose waa qiimo go'an oo ah $ 40 (warqad ku dheggan daaqada gadaasheeda darawalka ayaa siineysa xuduudaha aaga halka qidmada sagxadda ah lagu raaco; haddii aad ka socoto ama aadid meelaha ka baxsan aaggan, waa inaad bixisaa qiime jaban oo leh ugu yaraan $ 17).
Baska STM Airport Express 747 waxay bixisaa adeeg u dhexeeya garoonka diyaaradaha iyo Montreal 24 saacadood maalintii. Hal tikid ayaa ku kici doonta $ 10 (isbedelka saxda ah ee qadaadiicda kaliya marka la bixiyo baska) waxaana kujira isticmaalka aan xadidnayn baska STM iyo shabakada metro 24ka saac ee soosocda. Waxaa jira mashiin qaata kaararka deynta ee aagga imaatinka halkaas oo aad ka iibsan karto qiimayaasha (oo ay ku jiraan kaarka saddexda maalmood ah $ 18). Si aad u tagto istaanka baska ka tag aagga imaatinka oo aad midigta. Waxaa jira aag loogu tala galay basaska 747-ka. Basku wuxuu joogsan doonaa saldhigga mitrooga ee Lionel-Groulx, basaska qaarna waxay kusii socdaan meelo kaladuwan oo bartamaha magaalada ah (marquee baska ayaa sheegi doona).
Waa suurtagal in la aado magaalada iyadoo la raacayo jabanka caadiga ah nidaamka gaadiidka dadweynaha. Habeen dambe, waa sax, laakiin inta lagu jiro saacadaha ugu sarreysa, waxaad u baahan doontaa inaad ku dhammaystirto dhowr wareejin gawaarida laga yaabo inay buuxsamaan, sidaa darteed runtii waxaa ugu wanaagsan oo keliya in sidaas la sameeyo keliya haddii aad ku jirto miisaaniyad aad u hooseysa iyo / ama aad u iftiin yar tahay shandado.
Inta udhaxeysa 05:00 iyo 01:00, raac baska STM 204 bari (waa) kaas oo ka baxa dadka dibada ka imanaya 30 kii daqiiqo kasta ilaa Gare Dorval (Xarunta Tareenka Dorval). Hubi in darawalku uusan u socon galbeedka (galbeed) maadaama labada waddo looga adeegto ku dhowaad hal meel, calaamadduna ma tidhaahdo. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa 209-ka maalmaha shaqada si aad ugu tagto Gare Dorval. Sidoo kale, hubi inaad haysatid tigidhka uu darawalku ku siin doono maadaama ay tahay wareejin aad hadhow u baahan doonto. Laga soo bilaabo Gare Dorval, u isticmaal tigidhka wareejintaada si aad u raacdo mid kasta oo ka mid ah basaska 211, 411, 405, 425, ama 485 illaa saldhigga tareenka ee Lionel-Groulx. Sidoo kale hubi inay u socoto bariga sida isla wadooyinku u maraan galbeedka sidoo kale. Wareejintaadu waxay kuu oggolaan doontaa inaad soo gasho metro. U qaad khadadka oranjiga ah ee ku xiran Montmorency ama khadka cagaaran ee ku xiran Honoré-Beaugrand ee magaalada hoose ee metro. Tani waxay ku kacaysaa oo keliya $ 3.25, laakiin isbeddelka saxda ah ee qadaadiicda kaliya waa in la siiyaa darawalka ugu horreeya.
Inta udhaxeysa 05:00 iyo 01:00, isla qiimahan ($ 3.25, isbadalka saxda ah ee qadaadiicda kaliya), raac baska 356 (markale, hubi inuu darawalku usocdo bariga, maahan galbeedka) si toos ah bartamaha magaalada iyadoo la marayo Sherbrooke. Baskaan wuxuu udhawaadaa meel udhaw huteelada badhtamaha magaalada. Si kastaba ha noqotee, haddii loo baahdo, wareejin ayaa la dhammaystiri karaa si loo gaaro magaalada inteeda kale. Eeg qorsheeyaha safarka ee STM ama Khariidadaha Google wixii faahfaahin dheeraad ah.
At Gare Dorval sidoo kale waa suurtagal in la qabto tareenka RTM-ka ee taga magaalada hoose (Direction Lucien L'Allier), inta lagu jiro maalinta laga bilaabo 06: 00 illaa 20: 00 oo lagu raaco hal waddo oo keliya oo ah $ 6, taasoo horseedaysa saldhigga magaalada hoose ee Lucien L'Allier kaas oo sidoo kale ku yaal saldhigga mitrooga ee Lucien L'Allier.
Madaarka Caalamiga ah ee Plattsburgh iyo Madaarka Caalamiga ah ee Burlington, gudaha Mareykanka, waa 1 saac 20 min iyo 1 saac 50 min, gawaarida Montreal. Adirondack Trailways waxay bixisaa adeeg bas oo u dhexeeya Madaarka Caalamiga ah ee Plattsburgh iyo Montreal. Greyhound wuxuu baska ka bixiyaa Madaarka Caalamiga ah ee Burlington iyo Montreal. Rakaabka ka socda Mareykanka, garoomada diyaaradaha waxaa laga yaabaa inay bixiyaan qarash aad u fara badan marka loo barbardhigo Trudeau laakiin dhibaatada ugu darneyd ee diyaarinta gaadiidka dhulka ee u dhexeeya Mareykanka iyo Kanada.
Laga soo bilaabo Toronto, ka qaado Wadada weyn 401 bari qiyaastii 5 saac illaa ay ka noqoneyso Autoroute (Expressway) 20 dhinaca xadka ee Quebec. Kadib waxay qaadan doontaa ilaa hal saac in la yimaado magaalada hoose. Ka feejignow isbeddelada xawaaraha xad-dhaafka ah ee waddadan. Si aad u gaarto bartamaha magaalada raac calaamadaha Xarunta-Ville oo qaado Autoroute 720 (Autoroute 20 ayaa ka sii socota buundada Pont Champlain ilaa South Shore).
Laga soo bilaabo Ottawa, waxay ku saabsan tahay 2 saacadood bariga wadada weyn 417 (oo noqota Autoroute 40 ee Quebec) ilaa Montreal.
Laga soo bilaabo Magaalada Quebec, waxay qiyaastii 3 saacadood galbeed ka xigtaa Autoroute 40 ama Autoroute 20.
Ka tag Magaalada New York, ka qaado Interstate 87 waqooyi iyada oo loo sii marayo Albany iyo nuska bari ee Gobolka New York ilaa lix saacadood. Ka dib isgoyska xadka u dhow Plattsburgh, wadada weyn waxay noqoneysaa Autoroute 15, oo si toos ah u gasha bartamaha magaalada Montreal kana sii gudubta Pont Champlain, oo ah habka ugu quruxda badan magaalada. Waqtiga wadista laga bilaabo Plattsburgh ilaa iyo magaalada Montreal waa ugu yaraan hal saac.
Markaad ka tagto Boston, qaado Interstate 93 illaa Interstate 89 ka dib markaad u gudubto New Hampshire. Raac Interstate 89 woqooyi ilaa iyo Vermont illaa xadka isgoyska, halkaas oo ay isu rogto Wadada 133. Wadadan labaad waxay sii socotaa Autoroute 10, oo toos u gasha bartamaha magaalada Montreal. Safarka oo dhan wuxuu qaadanayaa ilaa 5 saacadood. Markaad ka gudubto xadka waxay qiyaastii 1½ saacadood u jirtaa Montreal.
Saldhiga Dhexe ee Montreal
Saldhiga Dhexe ee Montreal (Gare Centrale) () wuxuu ku yaal 895 rue de la Gauchetière Ouest, oo ah hal meel oo galbeedka ka ah Jaamacadda rue, waxaana u adeegta saldhigga Bonaventure metro (subway). Qiimuhu waa doolarka Kanadiyaanka ah haddii aan si kale loo cayimin.
Via Tareenka Kanada waxay ka shaqeysaa tareenada rakaabka ee xawaaraha iyo raaxada leh ee ka yimaada Montreal iyadoo la marayo wadada mashquulka badan ee Quebec-Ontario iyo meelaha loo maro waqooyiga Quebec, New Brunswick, iyo Nova Scotia. Dhamaan qiimayaasha hoos ku xusan waa qiimayaasha jaale-bixinta shanta maalmood ah ee safarka hal-ku-qaadashada ah ee fasalka “Raaxada” (tababaraha / dhaqaalaha), filo inaad bixiso ku dhowaad 50% ka badan haddii aad ballansatid maalinta safarka. Ka hubi bogga Via ee "heshiisyada degdegga ah", oo la dhajiyo Talaad kasta. Tigidhada aadka u jaban ayaa la heli karaa, sida caadiga ah jidadka tareenka masaafada dheer ama safarada masaafada gaaban ee saacadaha aan ugu sarreyn. Heshiisyada degdega ah ee safarada masaafada gaaban (tusaale Montreal-Toronto) waxaa sida caadiga ah la bixiyaa oo keliya toddobaadyada soo socda, halka heshiisyada masaafada dheer (tusaale ahaan Montreal ilaa Winnipeg) la heli karo dhowr toddobaad ka hor. Fasalka Ganacsiga waxaa loo heli karaa qiimo sare waxaana ka mid ah cunto, cabbitaanno khamri ah, cunto fudud, iyo internet bilaash ah oo bilaash ah meelaha nasashada saldhigga iyo tareenka. Kaarka ardayda ee ISIC wuxuu ku heli karaa qiimo dhimis Via, iyo Amtrak oo ku yaal Mareykanka. Baaskiilada sidoo kale waa la keeni karaa markabka sida saaran tareenada Corridor qaarkood inta lagu jiro bilaha xagaaga. Ka eeg safarka Tareenka Kanada wixii macluumaad dheeraad ah.
5 tareen maalintii waxay ku shaqeeyaan kana soo degaan Ottawa (2 saacadood, laga bilaabo $ 35).
6 tareen ayaa maalintii ka shaqeeya kana soo duula Toronto (4½ saacadood, laga bilaabo $ 85).
5 tareen maalintii waxay ku shaqeeyaan kana soo degaan Magaalada Quebec (3 saacadood, laga bilaabo $ 47).
Saddex fiidkii usbuucii, adeegga "Ocean" ee Via wuxuu u ambabaxayaa safarka habeenka Moncton, New Brunswick (15r hr, laga bilaabo tababaraha $ 110, $ 162 sagxadda sare, $ 219 qol jiif), iyo Halifax, Nova Scotia (20 saac, laga bilaabo $ 133 tababare, $ 187 sagxadda sare, $ 245 qol jiif) Xulashada hoyga jiifka ayaa ku kala duwan hadba xilliga. Tareennada u dhexeeya Montreal iyo Quebec, Badweynta waxaa hadda si gaar ah uga shaqeeya tareenno casri ah oo loo yaqaan 'Renaissance train' kuwaas oo loo dhisay adeegyadii hurdada ee Channel Tunnel ee u dhexeeyey Ingiriiska iyo Faransiiska.
Saddex fiidkii usbuucii, Badweynta ayaa sidoo kale soo jiidata tareenka "Chaleur" illaa iyo Matapedia. Tareenka ayaa kala qaybiya subaxa hore iyo Chaleur waxay raacdaa xeebta koonfureed ee Jasiiradda Gaspé ilaa Gaspé (17½ hr, laga bilaabo tababaraha $ 106, $ 165 qaybta sare, $ 215 qol jiif).
Via sidoo kale waxay bixisaa seddex safar oo wareeg ah usbuuciiba Senneterre, Abitibi (11½ hr, laga bilaabo $ 81), iyo Jonquière oo ku yaal Chicoutimi-Jonquière (9 saac, laga bilaabo $ 55). Labada tareenba waxay u shaqeeyaan sidii adeegyadii lamadegaanka: codsi joogsi ayaa laga samayn karaa meel kasta oo ay marayaan jidka loogu talagalay kuwa doonaya inay raacaan oo ay raacaan meelaha fog fog ee Quebec ee tareenku maro.
Amtrak waxay u shaqeysaa adeegga “Adirondack” ee magaalada New York (11 saacadood, laga bilaabo US $ 61) oo maalin kasta tagta, iyada oo isku xidhka Schenectady ilaa (laakiin aan ka iman) Chicago (24 saac, US $ 114) iyo New York ilaa Philadelphia (14 saac, US $ 97) iyo Washington, DC (16 saac, US $ 120). Tareenku wuxuu sidoo kale maraa inta badan xaafadaha New York wuxuuna ku dhajiyaa Lake Champlain qayb weyn oo safarka ka mid ah. Koonfurta Albany, marinku wuxuu raacaa webiga Hudson wuxuuna maraa dhowr goobood oo taariikhi ah. Aaminaada adeeggu aad ayuu u fiicnaaday tan iyo markii saacad dheeri ah lagu daray jadwalkii hore ee 10-hr, laakiin qofku waa inuu weli sabab u noqdaa suurtagalnimada soo noqnoqda ee imaatinka saacad ka dib jadwalka.
Safarka New York waa ka raqiisan yahay laakiin waa ka gaabis badan yahay baska (hoos eeg), oo qaadata 7-9 saac, laakiin waxay ka kooban tahay iyada oo leh raaxo sarreysa, qol dheeri ah, awood aad u weyn oo aad ku dhex socon karto tareenka isla markaana aad u booqan karto kafeega. cuntada iyo cabitaanka xilliga firaaqadaada, iyo aragtida wanaagsan ee tareenka harada Lake Champlain iyo muuqaalka Wabiga Hudson.
Rakaabka tareenka ee ka tagaya Boston waxay u qaadan karaan Adeegga Gobolka Saldhigga Penn, Magaalada New York, waxayna u wareejinayaan khadka Adirondack ee Montreal, laakiin qaabkani wuxuu u baahan yahay waqtiyo shaqo oo muhiim ah oo laga baxo magaalada New York.
Saldhigga tareenku ma laha santuuqyo joogto ah laakiin sida caadiga ah waa macquul in lagu ilaaliyo Via Rail wax ka yar hal maalin haddii lala safrayo. Waxaa jira Wifi iyo xoogaa xarumo koronto ah.
Waxaa jira adeegyo ballaaran oo laga helo Montreal oo ka imanaya magaalooyinka Ontario, Quebec, New York, Vermont, iyo Maine. Basasku imaadaan kana baxaan Saldhigga Centrale d'autobus (in aan lagu khaldin la Gare Centrale ama xarunta tareenka dhexe) ee 505 boulevard de Maisonneuve est (oo si toos ah uga sarreysa saldhigga mitrooga Berri-UQAM). Wac +1 514-842-2281 si aad u hesho jadwalka iyo qiimaha.
Adeegyada basaska ee magaalada Montreal waxaa bixiya Megabus (Tababar Kanada), Wadro Adirondack, Greyhound Kanada, Khadadka Greyhound, Voyageur, Iyo Orléans Express. Orléans Express waa maamulaha basaska ee dooxada St. Lawrence, oo ay ku jiraan wadada Montreal-Quebec City iyo isku xidhka Rivière-du-Loup ilaa Maritime Bus, oo u adeegta meelaha New Brunswick iyo Nova Scotia. Voyageur, oo ah shirkad hoosaad ka ah Greyhound Canada, waxay adeeg u fidisaa Hull iyo Ottawa, iyadoo ku xirmaysa marinnada basaska kale ee aadaya meelaha ku yaal galbeedka Kanada. Megabus waxay adeeg ku siisaa Kingston ilaa Toronto, iyadoo ku xirta marinnada basaska kale ee aada galbeedka New York, koonfurta Ontario, Michigan iyo Illinois. Gobollada kale ee Quebec waxaa u adeega shirkado kala duwan.
Khadadka 'Greyhound Lines' waxay bixiyaan saddex adeeg oo toos ah maalin kasta Adirondack Trailways waxay kaloo bixisaa laba adeeg oo toos ah maalin kasta, laga bilaabo New York, oo leh safarro dheeri ah oo la shaqeeyo dhammaadka usbuuca iyo xagaaga (8 saac, laga bilaabo US $ 76.50). Khadadka Greyhound sidoo kale waxay bixiyaan afar adeeg oo toos ah maalin kasta oo ka imanaya Boston (7 saac, laga bilaabo US $ 72). Ma jiro qiimo dhimis ardaygu ku sameeyo adeegga Montreal-New York.
Adeegga Montreal / US, tareenku wuu gaabiyaa laakiin si aad ah ayuu uga jaban yahay; kudhowaad C $ 62 marka loo barbardhigo qiyaastii C $ 75 baska. Si kastaba ha noqotee, illaa C $ 15 dheeraad ah, basku wuxuu sameeyaa safar aad u dhakhso badan oo marin aad u dhaqso badan u maraya caadooyinka; laakiin raaxada iyo muuqaalka, safarka tareenka dheer waxaa si raaxo leh ku qaatay.
Montreal waa jasiirad ku taal bartamaha Wabiga Saint Lawrence, oo laga heli karo oo kaliya buundada. Buundooyinka oo dhami ma ahan kuwo baaskiil loo heli karo; si kastaba ha noqotee, dhowr ayaa jira, oo ay ku jiraan biriijka xiisaha badan ee Jacques Cartier. Wadooyin baaskiil caan ah ayaa kajira magaalada oo dhan, gaar ahaan hareeraha Kanaalka Lachine, Rue Rachel, boulevard de Maisonneuve, rue Brébeuf, rue Berri, rue Cherrier iyo waliba wadada Laurier. Plateau-Mont-Royal waa halka ay ku yaalliin dariiqooyinkan badankood ee baaskiilku waana xaafadda, oo ay weheliso Mile-End deriska ah, halkaas oo ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee baaskiillada ku socda kuna socdaalaya gaadiid maalinle ah. Waxay leedahay tirada ugu badan ee caqliga badan iyo heerka lahaanshaha baabuurta ee qoyskiiba. Si kastaba ha noqotee, xatooyada baaskiilku waa arrin, gaar ahaan Plateau. Inta badan dadka deegaanka waxay dib u xasuusan karaan waqti markii ay arkeen xatooyada baaskiillada, in kasta oo xaaladdu ay soo hagaageyso hadda maadaama barnaamijka wadaagista baaskiillada dadweynaha, Bixi, la hirgeliyay. Ma ahayn wax aan caadi ahayn in qof kuu soo bandhigo baaskiil la soo xaday oo lagu iibiyo wadada. Si la mid ah uga feejignow maqaallada durugsan ee baaskiilkaaga; kuraasta, dambiilaha, iyo giraangiraha badanaa way fududaan karaan haddii aan si sax ah loogu xirin qafiska ama lagu xiro aaladda qufulka leh.
Laga soo bilaabo Xarunta Dhexe ee Montreal (Gare Centrale)
Markii aad ka degto tareenka, aad aagga sheegashada shandadaha oo halkaas ku sug in adeege shandado uu kuu keeno baaskiilkaaga. Haddii aad hubisay shandado kale, ka sheeg suunka xamuulka. Habka ugu fudud ee looga baxo saldhiga waa irridda weyn ee udhaxeysa sheegashada rarka iyadoo loo marayo garaashka gawaarida la dhigto ilaa de la Gauchetière. Dhammaan meelaha kale ee laga baxo ayaa looga baahan yahay inaad baaskiilkaaga ku qaadatid duulimaadyada jaranjarada. Dhinaca galbeed ee saldhiga waa irridda laga galo Magaalada Dhulka Hoostiisa iyo marin u helka xarunta Bonaventure metro ee ku taal khadka Orange. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan wiish wixi ka soo gala metro oo ka imanaya xarunta tareenka, taas oo macnaheedu yahay inaad u baahan tahay inaad qaadatid baaskiilkaaga iyo shandadahaaga dhowr duulimaad oo jaranjaro ah.
Ka imanaya Madaarka Caalamiga ah ee Montreal-Trudeau
Madaarku wuxuu ku yaal qaybta galbeed ee jasiiradda. Laga soo bilaabo terminaalka weyn, ka bax wadada weyn ee gala iyo midig u leexo. Dabayl ku sii wad wadada marinka ilaa is-weydaarsiga weyn ee ugu horreeya una leexo midig. Waxaad gaari doontaa Albert de Niverville Boulevard waxaana lagugu qasbi doonaa inaad u leexato bidix (koonfur) dhanka wadada weyn (Autoroute 20). Dhamaadka Boulevard-kan, u leexo midig Wadada Cardinal. Midigtaada, waxaad imaan doontaa marinka lugeeyaha ee lugta kaa mariya wadada tareenka oo kuu horseeda Dorval Circle, oo ah goob aad u mashquul badan oo taraafikada ah. Tani waxay umuuqataa cabsi gelin, laakiin nalalka taraafikada ayaa kuu oggolaan doona inaad si badbaado leh u raacdo Autoroute 20 illaa Dorval Boulevard (Boulevard Dorval). U soco dhanka koonfureed ee hoos Dorval Boulevard ilaa dhamaadka. Bidix ugu leexo Lakeshore Drive (Chemin Lakeshore) dhanka magaalada. Wadadani waxay isu rogaysaa Boulevard St. Joseph. Ugu dambayntii waxaad imaan doontaa waddo baaskiil oo dhankaaga midig ah oo dabeylo ka rida xeebta Lac-Saint Louis (qeyb ka mid ah wabiga Saint Lawrence) oo maraya magaalada Lachine. Ku sii soco jidkaas illaa aad ka gaarto irridda Kanaalka Mashiinka. Ka gudub kanaalka oo hoos u sii soco Wadada Baaskiilka Mashiinka Mashiinka (Piste Cyclable Canal Lachine) oo la soco calaamadaha Old Port (Vieux Port) ee Old Montreal (Vieux Montreal). Waddada Baaskiilka Baaskiilka Lachine wuxuu noqon karaa mid mashquul badan maalmaha fasaxa iyo ciidaha, marka diyaar u noqo inaad waqtigaaga qaadato. Waxaa lagu dhajiyay dhererkeeda oo dhan.
Ka yimid Ontaariyo
Baaskiilleyda ku soo socota Montreal ee galbeedka waa inay u maraan waddooyinka waawayn ee labaad Dorion, halkaas oo Autoroute 20, oo aan lagu geli karin baaskiil inta badan dhererkeeda, ay noqoto mid la heli karo maaddaama ay ka gudbeyso buundooyinka marka hore Île Perrot (Perrot Island) ka dibna loo raaco Jasiiradda Montreal (oo ku taal Saine -Anne-de-Bellevue). Baaskiiladu waa inay ku isticmaalaan wadada dhinaceeda buundooyinkan maadaama taraafikada badanaa culus yihiin. Halkan, Baaskiileydu waxay qaadan karaan Lakeshore Boulevard iyo Lachine Canal Bike Path (eeg qaybta Madaarka sare) ilaa Old Montreal iyo bartamaha magaalada.
Buundada Isle-aux-Tourtes ee Autoroute 40 laguma mari karo baaskiil.
Ka yimid Mareykanka
Baaskiilleyda ku soo socota Montreal ee Koonfurta Shore ilaa koonfurta iyo bariga Montreal waxaa laga yaabaa inay galaan jasiiradda Montreal dhowr siyaabood (eeg khariidada).
Dariiqa ugu hubo (laakiin aan doqon lahayn) waa adeegsiga waddada Jacques Cartier Bridge. Markuu u xirmin dayactirka, wuxuu furan yahay sanadka oo dhan iyo maalinta oo dhan. Waddo la maro oo baaskiil ah oo ku teedsan wabiga Saint Lawrence River ayaa bixisa habka ugu muuqaalka badan ee buundada.
Waddo isku mid ah oo caan ah ayaa ka timaadda Saint Lambert Locks (Ecluses Saint-Lambert) ee Saint Lawrence Seaway agagaarka Buundada Victoria (Pont Victoria) ee bariga Montreal. Aaladda mashiinka baaskiilka ayaa laga yaabaa in lagu xannibo muraayadaha madadaalada ee markab maraya badda. Halkan, Baaskiileydu waxay maraan wadada orodka Grand Prix (Gilles-Villeneuve circuit) oo ku taal Île Notre Dame illaa Bridge Bridge ilaa Montreal. Wadadani waxay u xidhan tahay mararka qaarkood dhacdooyinka tartanka baabuurta. Xaaladdan oo kale, wadayaasha baaskiil wadayaashu waxay qaadan karaan leexad wareeg ah oo loo maro waddo jajab ah oo u qaybisa badda iyo wabiga Estacade, baraf baraf ah oo ka tallaaba wabiga is barbar socda Buundada Champlain ilaa Nun's Island iyo ugu dambeyn Montreal. Isgoys yar oo la yaqaan ayaa ku lug leh mid ka mid ah Sainte Catherine Locks (Ecluses Sainte-Catherine) oo ku taal Saint-Catherine koonfurta Montreal. Buundooyinkaan waxay ka gudbaan biyaha badda isla jidkaas lamid ah kuwa qufulan ee Saint Lambert. Xaaladdan oo kale, wadada loo maro barafka barafka ee 'Estacade' waa la jeexay. Xiriiriyaalkan baaskiil ee ka imanaya South Shore waxay furan yihiin 15 Abriil ilaa 15 Noofambar, laga bilaabo 06:30 illaa 22:00. .
Buundada 'Champlain Bridge', Buundada 'Mercier Bridge', iyo Tunonta Lafontaine dhab ahaan looma geli karo baaskiillada. Kuwani waxay noqon karaan khatar, xitaa baabuur. Ma jiro waddo baaskiil oo maraya Buundada Mercier.
Montreal taariikh ahaan waxaa loo kala qaybiyey bari iyo galbeed by boulevard Saint-Laurent, iyadoo dhinaca galbeed dhaqan ahaan ay tahay Anglophone halka bariga dhaqankeeduna yahay Francophone. Cinwaanada lambarrada ah ee waddooyinka ka gudba Saint-Laurent ayaa halkaas ka billaabma kuna kordha labada dhinacba; cinwaanada badankood waxaa loo bixiyaa "rue ____ Ouest" (galbeedka) ama "rue ____ Est" (bariga). Jidadyo badan ayaa loogu magacdaray awliyada Katooliga iyo tirooyinka taariikhda deegaanka, kuwa caanka ah iyo kuwa dahsoon. Magacyada waddooyinka Montreal, “bariga” iyo “galbeed” waxaa loola jeedaa jihada u dhiganta Wabiga St. Lawrence, iyo “woqooyiga” iyo “koonfurta” waxaa loola jeedaa jihada si toos ah ugu toosan wabiga St. Lawrence. Sababtoo ah wabiga St. Lawrence wuxuu ku dhowaad waqooyi-koonfur u dhow magaalada hoose ee Montreal, "bariga", "galbeed", "woqooyi", iyo "koonfur" runti waa waqooyi-bari, koonfur-galbeed, waqooyi-galbeed iyo koonfur-bari siday u kala horreeyaan. Jahwareer, khariidadaha badankood ee lagu soo bandhigo magaalada waxay leeyihiin "Montreal north" dusheeda taas oo lagu wareeri karo hage dayax gacmeed adeegsanaya cirifka woqooyi. Sidoo kale, ha isku dayin inaad dhex socoto adoo fiirinaya qorraxda!
Socodku waa dariiqa loo roon yahay ee lagu dhex maro bartamaha magaalada ciriiriga ah iyo jidadka cidhiidhiga ah ee Old Montreal, gaar ahaan bilaha kulul. Si kastaba ha noqotee, iska jir inta lagu jiro bilaha jiilaalka, maadaama dariiqyada la maro ay noqon karaan kuwo baraf leh oo aad khatar u ah ka dib barafka jiilaalka iyo duufaanka barafka. Kabaha jiilaalka ee leh qabasho wanaagsan ayaa lagama maarmaan u ah badbaadada laamiyada aan la nadiifin. Sidoo kale iska ilaali (intaad kari karto) dhalaalida barafka ka soo dhacaya balakoonada dushooda iyo saqafyada. Laakiin waxaad marwalba jaranjarada uqaadan kartaa magaalada Montreal ee caanka ah “Magaalada Hoose”Montréal souterrain), oo la yiraahdo RÉSO, oo ah shabakad waddooyin lug ah oo isku xira saldhigyada Métro (tareenka dhulka hoostiisa mara), Xarumaha dukaamaysiga, iyo dhismayaasha xafiisyada.
Jaywalking waa faafitaan waana dhif in la ciqaabo. Si kastaba ha noqotee, wadayaashu badanaa ma joojinayaan ama xitaa gaabinayaan haddii qof lugeynaya uu ka soo baxo hortooda, xitaa meelaha calaamadeysan. Isgoyska, si kastaba ha noqotee, qof lugeynaya ayaa xaq u yeelan doona inuu maro ka hor inta uusan wareejin taraafikada darawalada badankoodna way ixtiraamaan tan. In kasta oo darawalada Montreal sumcad xumo u yihiin dagaal-yahanka, haddana guud ahaan way ixtiraamaan dadka lugaynaya.
Rue Sainte-Catherine waa halbowlaha ganacsi ee ugu muhiimsan Montreal iyo marinka dadka lugeynaya ee ugu mashquulka badan. “Magaalada Dhulka Hoostiisa” iyo Khadadka Cagaaran (ama sadarka 1) ee Montreal's Metro waxaa si fudud looga heli karaa dhammaan dhismayaasha waaweyn ee xafiisyada, suuqyada laga dukaameysto, dukaamada waaweyn, iyo dhismayaasha tiyaatarka ee ku taxan. Dukaamada silsiladaha yaryar iyo makhaayadaha ayaa sidoo kale u tartamaya boos ganacsi oo qiimo leh. Kaniisado taariikhi ah oo sifiican loo ilaaliyo oo leh dhul cagaaran ayaa bixiya aag xasilloon oo ka duwan calaamadaha waaweyn ee neon ee naadiyada fallaaraha. Hoteellada waaweyn guud ahaan waxaa laga heli karaa hal ama laba baloog waqooyiga iyo koonfurta Sainte-Catherine bartamaha magaalada. Baararka, makhaayadaha, iyo naadiyada qoob-ka-ciyaarka waxay ku urursan yihiin meel u dhow xaafadda Sainte-Catherine oo ku wareegsan Bisha Cas iyo Bishop, iyadoo la siinayo macaamiil u badan Ingiriisiga ku hadla. Rue Saint-Denis, bariga fog, iyo Gay Village oo udhaxeysa Berri iyo de Lormier, xitaa inbadan bariga, inta badan waxay kuhadlaan luuqada faransiiska. McGill College Boulevard oo ku taal bartamaha magaalada kana soo jeeda Saine-Catherine waxay bixisaa aragti furan oo ku saabsan buurta Royal ee woqooyiga iyo muuqaal qurux badan oo ku yaal sklecrament-ka Place Ville-Marie ee koonfurta. Madaxaaga kor u taag oo ka taxaddar inaad raacdo qulqulka dadka ee waddadan: dad badan oo lugeynaya ayaa inta badan ka gudba waddooyinka isgoysyada ka soo horjeedka nalalka cas, iyagoo halis gelinaya naf iyo addinba.
Rue Prince-Arthur, bariga Saint-Laurent, waxaa loogu talagalay dadka lugeynaya oo keliya. Goob kale oo lugeynaya kaliya waa magaalada Montreal ee Chinatown, kuna taal Rue de la Gauchtière Est oo udhaxeysa Saint-Urbain iyo Saint-Laurent. Xeelad wanaagsan oo loo maro marinka magaalada Montreal ayaa ah in la xasuusto in waddooyinka ay u janjeeraan dhanka Mount Royal, oo woqooyiga ka xigta magaalada isla markaana si fudud looga arki karo meelaha badankood.
Degmooyinka ku hareeraysan bartamaha magaalada Montreal ayaa si gaar ah ugu faraxsan lugta. Dhinaca koonfureed waa Old Montreal (Le Vieux-Montréal) (jidadkeeda cidhiidhiga ah iyo dhismayaasha laga soo bilaabo qarniyadii 17aad iyo 18aad runti waxay kaa dhigi kartaa inaad dareento inaad joogtid Old Europe) iyo Old Port (Le Vieux-Port), a jardiinka hareeraha biyaha oo leh bandhigyo iyo dalxiisyo doon, ayaa caan ku ah dadka deegaanka. Waqooyiga, Mile Square Square iyo Xarunta Jaamacadda McGill waxay kuxirantahay inta udhaxeysa Mount Royal iyo Sherbrooke Street oo kutaala koonfurta. Guryo waaweyn oo reer Fiktooriya ah iyo guryo-magaalo ayaa laga heli karaa hareeraha jidadka dhaadheer, qaar badan oo ka mid ah ayaa hadda degan xafiisyada Jaamacadda McGill iyo maktabadaha. Galbeedka badhtamaha magaalada waa barwaaqo Westmount, oo tusaale fiican u ah guryo iyo jardiinooyin u eg Ingiriisigii qarnigii 19-aad (oo ay ku nool yihiin dad aad u badan oo ku hadla Ingiriisiga) iyagoo fuulaya dhaadhaca qaybta galbeed ee Mount Royal (kolba intaad fuulayso, ayaa sii weynaanaya aqal hore). Bariga iyo waqooyi-bari ee bartamaha magaalada waa inta badan dadka ku hadla luqadda Faransiiska ee Gay Village (Le Village Gai) iyo Plateau (Plateau Mont-Royal). Jidka ka dib bandhigyada waddooyinka isku beddelashada-qarnigii-19-naad ee isku xigxiga iyo saddex-geesoodka, oo ay ku buuxsan yihiin jaranjarooyinka bannaanka ee Montreal, buuxdhaafka jardiinooyinka hore (ama barafyada barafka ku dahaadhan, waxay kuxirantahay waqtiga sanadka), iyo dukaamo yaryar oo la dhigo meel walba. iyo cranny. Dadka jecel inay arkaan dhaqan halka uu ku nool yahay, Le Plateau waa meesha lagu warwareego.
Mount Royal (Mont-Royal) sidoo kale waxaa laga heli karaa xudunta magaalooyinka lugta. Dadka lugeynaya ayaa fuuli kara Rue Peel cirifka koonfureed ee baarkinka. Jaranjarooyin taxane ah oo la cusbooneysiiyay ayaa toos kuu geyn doona Chalet-ka oo ku dhow buurta dusheeda, iyada oo leh muuqaalkeeda caadiga ah ee bartamaha magaalada. Waqti firaaqeysan oo sare fuulaya kuwa ku sugan Olmsted Road (6.5 km), Baaskiil ballaaran, tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah looga heli karo Plateau ee Parc Jeanne-Mance (sidoo kale loo yaqaan Field Feldcher). Jidad yar-yar oo si isdaba joog ah uga socda laamkan. Waddada barafka lagu maro ee waddanka loo gudbo ayaa sidoo kale u koreysa xagga sare xilliga qaboobaha. Xadiiqadda Mount Royal waxaa naqshadeeyay Frederick Olmsted, oo ah naqshadeeye muuqaal ah oo noolaa 1822 ilaa 1903 wuxuuna sidoo kale mas'uul ka ahaa naqshadeynta Central Park ee magaalada New York iyo Emerald Necklace ee Boston.
Ku wadista (SAAQ) Montreal waxay caqabad ku noqon kartaa wadayaal badan oo Waqooyiga Ameerika ah. In kasta oo loo leexanayo midigta iftiinka casaanka ah ayaa loo oggol yahay inta kale ee Quebec (marka laga reebo isgoysyada ay calaamad muujineyso in tan aan la oggoleyn), midigta midigta ee casaanka waa mamnuuc jasiiradda Montreal. Nalalka joogsiga ee inta badan isgoysyada magaalada hoose waxay ku yaalliin dhinaca ka soo horjeedka isgoyska, ma aha qadka joogsiga sida Yurubta qaar.
Isticmaalka milixda wadada si wadooyinka looga dhigo kuwa bilaa baraf ah inta lagu jiro jiilaalka daran waxay ku qaadataa wadooyinkeeda, kuwaas oo si xoog leh boholo u ah ama ku xiran dhismo joogto ah. Socodka magaalada hoose waa cufan. Baarkinka waddada wuu adkaan karaa. Mitirrada baarkinka waxaa laga isticmaalaa toddobo maalmood usbuucii inta badan degmooyinka (Isniinta ilaa Jimcaha 09: 00-21: 00, Sa 09: 00-18: 00, Su 13: 00-18: 00), oo ay ku jiraan ciidaha sharciga ah. Qiimaha tikidhada baarkinka caadiga ah waa $ 52. Tigidhada baarkinka waxaa racfaan ka qaadan kara maxkamada oo kaliya milkiilaha gaariga lagu soo rogay xadgudubka, sidaas darteed hadii gaari kiro ah la gatay, qofka kireeyay waxaa laga yaabaa inuusan awoodin inuu ka doodo dacwada. Baarkinka baabuurta la dhigto ee magaalada hoose waa qaali qiyaastii $ 3 saacaddii mitirka baarkinka ama $ 25 maalintii baarkinka ganacsiga. Calaamadaha gawaarida la dhigto dhammaantood waxay ku qoran yihiin Faransiis, waxayna qeexi doonaan maalin iyo saacad (oo ku saleysan saacadda 24-saac) oo ay weheliso shuruudaha baarkinka. Wadooyin badan oo halbowle ah ayaa mamnuucaya dhigashada hal dhinac inta lagu jiro saacadaha ciriiriga ah, gawaarida waxaa lagu ganaaxayaa $ 150 oo lagu daray kharashka jiidaya iyo khidmadaha kale. Montreal ma rinjineyso cidhifka gaduudan ee ku xigta biyaha dabka, laakiin wali waa sharci daro in halkaa la dhigto.
Waxa kale oo jira meelo badan oo baabuurta la dhigto oo gaar loo leeyahay iyo kuwa guud, oo qiimahoodu aad u kala duwan yahay. Xitaa waxaa jiri kara kala duwanaansho $ 15-20 ah oo udhaxeysa laba baarkinka gawaarida la dhigto oo kaliya dhowr meelood oo midba midka kale ah.
Inta lagu jiro bilaha jiilaalka, baraf culus ayaa dhaca. Kaddib duufaan baraf ah, hawsha “diyaarinta” (ka saarista barafka) si xoog leh loo diyaariyey ayaa ku bilaabmaysa cabsi-gelinno waaweyn oo barafka lagu xaaqay iyo gawaarida xamuulka oo nadiifinaya, calaalaya, iyo qaadista barafka. Haddii aad ka tagto gaarigaaga oo dariiqa taagan, fiiro gaar ah u yeelo calaamado liin dhanaan ah "aan dhigasho lahayn" oo ka muuqan doona waddooyinka in la nadiifiyo. Gawaarida waawayn waxay dhawaajin doonaan dhawaqa dhawaaqa 2-dhawaqa waxyar ka hor nadiifinta ah. Kani waa ogeysiis ah in waddo la baneynayo oo dhamaan gawaarida taagan la sheegi doono / ama la jiido haddii aan la dhaqaaqin. Sababtaas awgeed waa muhiim inaad awood u yeelatid inaad hubiso gaarigaaga ugu yaraan hal mar maalintii ka dib marka uu baraf da'o. Waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo baarkinka gudaha ama dhulka hoostiisa haddii ay u badan tahay nadiifinta barafka.
Wadooyin fara badan oo ku yaal magaalada hoose waa hal wado, taas oo adkayn karta ka warqabida. Haddii aad ku aragto calaamadda isgoyska oo leh fallaadho jihada oo ku jira goobaabin cagaaran, taasi macnaheedu waa kuwani waa tilmaamaha kaliya ee laguu oggol yahay inaad leexato. Wareegyada bidix waxaa loo oggol yahay nalka cagaaran haddii aysan jirin calaamado kale oo mamnuucaya. Soo-booqdayaashu waa inay yaqaanaan cagaaran dhalaalaya iftiinka, oo tilmaamaya bidix-leexasho la ilaaliyo (mudnaanta), oo u dhiganta falaarta cagaaran ee qaybaha kale ee adduunka. Calaamadaha qaarkood waa fallaaro cagaaran oo dhalaalaya, tani waa isla macnaha. Gawaarida waaweyn (xawaareyaasha waaweyn ama kuwa waaweyn) waxay dhib ku noqon karaan booqdayaasha, maadaama calaamadaha badankood yihiin Faransiis, laakiin astaamaha badankood waxay lamid yihiin kuwa Ingriiska Kanada iyo Mareykanka.
Baaskiil wadiddu waa habka ugu wanaagsan ee lagu booqdo magaalada, gaar ahaan xaafadaha dhexe sida Plateau Mont-Royal; waa qaab gaadiid aad loo jecel yahay marka cimilada qaboobaha ugu qabow dhammaato. Magaaladu waxay ku wareegsan tahay 660 km oo meerto waddooyin ah, oo ay ku jiraan qaar ka gudba St. Lawrence una gudba Jasiiradda Montreal. Jidka ugu wanaagsan uguna wanaagsan waa wadada loo maro Lachine kanaalka oo ka soo baxa Lachine, kuna teedsan Lac St-Louis, ilaa Old Montreal kanaalka. Waxaad uga gudbi kartaa dhanka koonfureed ee xeebta Jacques Cartier Bridge, Île Notre-Dame, ama waxaad mari kartaa buundada barafka ee Estacade oo ka timaadda Île des Sœurs.
Xitaa haddii aad ku socoto wadada baaskiilka, iska jir darawalada gaar ahaan haddii ay jeedinayaan, maadaama khadadka muuqaalka ee isgoysyada aan si fiican looga dhaqan gelin magaalada. Guud ahaan wadayaasha Montreal ee xaafadaha bartamaha waxaa looga bartay inay wadada la wadaagaan baaskiillada sidaa darteedna waa dad edeb leh, had iyo jeer waxaa jira in yar, oo badanaa ka yimaada xaafadaha ka baxsan, kuwaas oo darawalada oo dhan u bixiya magac xun Wadooyinka yar yar ee magaalada dhexdeeda qaar baa looga kala gooyaa baabuurta taagan, taas oo hoos u dhigaysa aragtida, adiga iyo wadaha labadaba. Wadada baaskiilka ee inta badan dadku ku kulmaan ee loo yaqaan 'rue Rachel one' waa tan ugu xun tan, si kastaba ha noqotee qaybta Plateau ee wadada dib ayaa loo cusbooneysiin doonaa dhawaan si looga dhigo mid amaan ah oo cagaaran Haddii qofku ku raaxeysto wadista Montreal, qofku guud ahaan wuu dareemi karaa baskiil raaxeysan halkaas. Lugeeyayaasha Montreal waxaa lagu yaqaan inaysan sugin laydh isbeddela haddii aysan jirin gawaari imaanaysa; Baaskiileydu xoogaa waa sidaas oo kale waxayna badanaaba ula dhaqmaan astaamo badan oo joogsi ah oo ku yaal waddooyinka la deggan yahay sidii calaamadaha soo-saarka marka loo eego calaamadaha istaagga. Xirashada koofiyad looma baahna sharciga, hase yeeshe, carruurta gaar ahaan, waxaa fiican in laga badbaado intii laga xumaado.
Nidaamka Bixi waa nidaam wadaagga baaskiilka dadweynaha. Waxaa lagu qiimeeyay kan ugu wanaagsan adduunka, waxaa loo naqshadeeyay laguna hormariyay Montreal tan iyo markaasna waxaa loo dhoofiyay magaalooyin badan oo adduunka ah oo ay ku jiraan London, UK iyo Sydney, Australia. Kaararka amaahda ee waaweyn waa la aqbalaa. Bixi waxaa loogu tala galay gaadiidka maxaliga ah ee firfircoon laakiin waxaa heli kara dalxiisayaasha sidoo kale. Lacag dhan $ 5 oo raqiis ah, waxaad ku isticmaali kartaa baaskiiladaha Bixi inta aad jeceshahay 24 saacadood haddii aadan isticmaalin baaskiil gaar ah in ka badan 30 daqiiqo markiiba ka hor intaadan ku celin saldhigga wax lagu xidho. Ka dib markaad baaskiilka ku soo celiso saldhigga wax lagu xidho, waxaad heli kartaa baaskiil kale (xitaa isla saldhigga) kadib 2 daqiiqo oo sugitaan ah. Waxaa jira in ka badan 400 saldhig oo Bixi ah oo leh in ka badan 5000 baaskiil oo ku hareereysan magaalada oo ku urursan badhtamaha magaalada iyo xaafadaha dhexe sida Plateau (in kasta oo ay sii ballaadhayso mar walba). Xarunta macluumaadka dalxiiska waxay leedahay khariidadaha saldhigyada. Koofiyadaha iyo qufulada lama bixiyo. Waad isticmaali kartaa qufulkaaga, laakiin sida caadiga ah waxaa jira saldhig aan ka fogeyn dariiqa ganacsiga sidaa darteed ku soo celinta Bixi meesha ugu dhow ayaa had iyo jeer ah doorashada ugu nabdoon uguna qiimaha badan. Saldhigyadu si dhakhso ah ayay u buuxsamaan oo u madhnaadaan; waxaa laga yaabaa inaad baaskiil ku tagto saldhigga xiga si aad u hesho meel ku xiran oo madhan. Haddii aad haysato taleefan casri ah, waxaa jira barnaamij ku tusaya waqtiga-dhabta ah saldhigyada kuugu dhow, inta baaskiil ee la soo xiray, ama haddii ay jirto meel ku xiran oo lacag la'aan ah.
Dukaammada kirada barafka lagu ciyaaro ee loo yaqaan 'skate' iyo 'baaskiillada' ayaa caadi ah, gaar ahaan Old Port iyo Plateau. Booqo La Maison des Cyclistes (guriga baaskiiladaha) oo ku yaal 1251 rue Rachel Est wixii macluumaad ah ee ku saabsan baaskiil wadista Montreal. (Eeg Samee waddooyinka baaskiil gaar ah).
Tareenka dhulka hoostiisa mara ama baska
Khariidadda saldhigyada metrooga
Nidaamka gaadiidka dadweynaha, ee ay maamusho Société de transport de Montréal (STM), waa amaan, hufan, guud ahaanna waa kufiican in la isticmaalo. Tigidhada waxaa lagu badalay kaarar wata xarig birlab ah oo wata hal safar, oo loo yaqaan an à la carte tigidh Kuwani waxay ansax yihiin hal safar (oo ay ku jiraan wareejin aan xadidnayn oo isku mid ah 90 daqiiqo) tareenka iyo basaska, oo midkiiba ku kacayo $ 3.25 (qiimaha saxda ah ee qadaadiicda ayaa looga baahan yahay basaska laakiin metrooga) laakiin sidoo kale waa la heli karaa wax ka yar waxaad ka iibsaneysaa labo $ 6.00 ama toban $ 27.00 (kaarka OPUS ayaa loo baahan yahay) midkood metro metro ama mashiinka tikidhada tooska lagu iibiyo ee xarumaha metro. Calaamadaha iyo ogeysiisyadu waxay ku qoran yihiin oo keliya Faransiis, in kasta oo mashiinnada tikidhadu ay ku hadlayaan labada luqadood ee Faransiiska iyo Ingiriiska. Shaqaale badan oo metro metro ayaa sidoo kale awooda inay ku hadlaan Ingiriisiga.
Saldhigyada dhulka hoostiisa mara ee Montreal iyo gawaarida tareenka ma laha hawo qaboojiye: Metro-ga mararka qaar si aan fiicneyn ayey u kululeysaa, xilli kasta. Si kastaba ha noqotee, weli waa xulashada ugu fiican ee gaadiidka magaalada.
Kaliya tikidhada mitrooga qaarkood ayaa ku shaqeynaya Laval iyo Longueuil. 10-tigidhada safarka, iyo tikidhada toddobaadlaha iyo billaha ah, wali lama aqbalin. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad tikit kale ku iibsato isla qiimahaas ($ 3.25) Liis buuxa oo dhammaan noocyada tikidhada ah iyo ansaxnimadooda ayaa laga heli karaa halkan.
Waa inaad haysataa kaarkaaga lacag bixinta maadaama ay tahay wareejintaada iyo caddeyntaada bixinta (warqadihiisa); kormeerayaasha qiimaha ayaa ku siin kara ganaax weyn haddii aadan awoodin inaad tustid markii ay codsadaan.
Haddii aad u isticmaaleyso lacag kaash ah inaad ku bixiso baskaaga, waxaa muhiim ah inaad heysato qiimaha saxda ah maadaama darawalka uusan isbadal bixin; waxaad heli doontaa tigidh tigidh ah, caddeyntaada bixinta iyo wareejintaada. Sawirro iyo tilmaamo gaar ah ayaa laga heli karaa halkan.
Kaararka dalxiisku wuxuu bixiyaa socdaal aan xadidnayn oo baska iyo metro ah muddo hal maalin ah ($ 10) ama saddex maalmood ($ 18) waxayna si fiican ugu qalmaan in laga fogaado khalkhalka isbeddelka, hubinta waqtiyada wareejinta iyo xaddidaadaha, iyo ka walwalka inaad ka degto joogsiga qaldan iyo in dib loo bixiyo. Waxa kale oo jira ikhtiyaari ah fiidkii aan xadidnayn ($ 5), oo ansax ah inta udhaxaysa 18:00 iyo 05:00 subaxda xigta, taas oo wax ku ool noqon karta habeenka la baxayo, maxaa yeelay way ka jaban tahay iibsiga tigidhka laba-geesoodka ah (oo qiimihiisu yahay $ 6) . Iyaga ayaa laga heli karaa iibsashada dhammaan saldhigyada metro (bixinta lacag caddaan ah ama isticmaal kaararka amaahda ama kaararka deynta oo keliya). Toddobaadkiiba ($ 25.50, oo ansax ah hal toddobaad oo taariikhi ah oo soconaya Isniinta illaa Axadda) iyo bil kasta ($ 83, oo ansax ah bisha jadwalka) ayaa sidoo kale la heli karaa; si ka duwan hal maalin iyo saddex maalmood kaararka, kaararka toddobaadlaha iyo billaha ah waa in lagu buuxiyaa kaarka OPUS (hoos eeg) oo aan lagu heli karin foomka tigidhada warqadda ah.
Kaarka OPUS waa kaar casri ah oo leh jajab ay ku jiraan qiimahaaga iyo macluumaadka wareejinta. Kaarka OPUS waxaa laga iibsan karaa dhammaan saldhigyada metro iyo meelaha lagu iibiyo qiimaha safarka. Laga bilaabo Janaayo 2017, kaarka wuxuu ku kacayaa $ 6. Waxaad ka heli kartaa iibiyaha kuugu dhow halkan.
Kaararka OPUS waxaa lagu buuxin karaa saldhigyada metro iyadoo la adeegsanayo mashiinnada otomaatiga ah ama qolka tikidhada.
Websaydhka STM wuxuu bixiyaa adeegga safarka-qorsheeyaha khadka tooska ah. Qorshaynta safarka sidoo kale waa la samayn karaa iyadoo la adeegsanayo Khariidadaha Google. Khariidadaha basaska bilaashka ah iyo nidaamka mitrooga ayaa laga heli karaa qolka tikidhada inta badan saldhigyada mitrooga. Kuwani waa faa'iido in la helo halka aad ku taal jasiiradda.
Saldhig kasta oo metro ah, tilmaamaha laguma tilmaamo jihooyinka jahooyinka, sida galbeedka ama u socdaalka bari. Taabadalkeed, tareenadu waxay aadaan jihada qadadka metro-ka. Ku khadka cagaaran waxay ka socotaa magaalada Angrignon ee galbeedka ilaa Honoré-Beaugrand ee bariga. Haddii aad u safri lahayd dhanka bari, tusaale ahaan, waad raadsan lahayd Honoré-Beaugrand on platform. Haddii aad u safri lahayd galbeedka, waad raadsan lahayd Angrignon. Waxaa jira afar is-weydaarsi oo ay rakaabku ku beddeli karaan khadadka tareenka dhulka hoostiisa iyadoo aan laga qaadin lacag dheeri ah: Snowdon (buluug / liin), Lionel-Groulx (oranji / cagaar), Berri-UQAM (cagaar / jaalle / liin), iyo Jean-Talon (oranji / buluug).
Baaskiillada waa loo oggol yahay tareennada dhulka hoostiisa mara ee ka baxsan saacadaha ciriiriga sida: 10: 00-15: 00 iyo 19: 00 illaa dhammaadka adeegga maalmaha shaqada iyo maalmaha oo dhan Sabtiyada, Axadaha, iyo ciidaha sharciga ah. Baaskiiladaha waxaa loo oggol yahay oo keliya gaariga hoggaanka tareenka illaa ugu badnaan 6. Shaqaalaha STM ayaa u diidi kara baskiillada metro sababo xagga amniga ah sida dhacdooyinka gaarka ah ee laga yaabo inay dhaliyaan heer sare oo fuula. Liisaska dhacdooyinka noocan oo kale ah waxaa lagu dhajiyay websaydhka STM iyo meelaha laga soo galo metro. Inta lagu jiro xilliga ciida Montreal, baaskiillada marmar dhif ah lama oggola.
Baaskiil wadista gudaha saldhigyada ama Magaalada Dhulka Hoostiisa ah waa mamnuuc.
Montreal waxay leedahay nidaam tareen oo rakaab ah oo ay maamusho Réseau de transport métropolitain (RTM, oo horay loo oran jiray "AMT") oo leh termini xarunta dhexe ee Montreal (Gare Central) iyo Lucien-L'Allier (labaduba waa laga heli karaa metro). Tareennada safarka waxtar ayey u leeyihiin inay aadaan xaafadaha iyo magaalooyinka ku dhow.
Saldhigyada tareenka ee kala-baxa ayaa loo qaybiyaa lix aag oo ka baxa magaalada hoose. Saldhigyadu waxay leeyihiin mashiinno otomaatig ah oo ay tahay inaad ka iibsato tigidh ku habboon aagagga saldhigga aad u safrayso ama aad ka socoto, ku alla kii ka fog (tusaale ahaan, safarka Aagga 1 illaa Aagga 3 ama liddi wuxuu u baahan yahay tigidhka aagga 3) . Kaadhka tigidhada horay loo sii iibsaday (SOLO) waa in lagu ansaxiyaa skaarayaasha kaarka ee laga soo galo barxadda. Guud ahaan, qiimaha dhimista (ardayda iyo waayeelka) waxay ubaahan yihiin aqoonsi aysan heli karin dadka safarka ah, laakiin hadii aad dagantahay aaga, weydii shaqaale faahfaahin dheeraad ah maadaama sharciyada ay adagyihiin, laakiin waxaad heli kartaa keyd fiican.
Tareenka kumajiraan mashiin tikit ah oo kormeerka tigidhada waa nasiib daro. Tigidhada khaldan mararka qaarkood lama dareemo maxaa yeelay kormeerayaashu waxay hubiyaan mararka qaarkood. Si kastaba ha noqotee, waxaa ugu wanaagsan in laga fogaado qaadashada fursadaha sida haddii tikidhku uusan ansax ahayn, macaamilku wuxuu heli karaa ganaax dhan $ 400. Mashiinnada tikidhadu waa inay hadda dhammaantood ku hadlayaan laba Ingiriisi iyo Faransiis. Labada saldhig ee magaalada hoose waxay leeyihiin goobo tigidho isniinta ilaa jimcaha, laakiin fiidkii ma ahan. Saldhigyada kale sidoo kale waxaa laga yaabaa inay leeyihiin waabab laakiin guud ahaan keliya inta lagu jiro saacadda degdegga subixii ama galabtii.
MapArt waxay soo saartaa khariidad aad u fiican oo ku jirta buug-qaab ka mid ah faras-magaalaha Montreal iyo hareeraheeda, oo ay ku jiraan Vieux Montréal, Mount Royal, Plateau, iyo aagagga ilaa woqooyiga sida Jaamacadda Montreal iyo illaa koonfurta illaa Parc Jean-Drapeau. Foomkaasi waa mid waxtar leh maadaama aad ka fogaan karto inaad had iyo jeer isku laabto khariidadda jasiiradda oo dhan.
Hoos waxaa ku yaal khariidad aasaasi ah oo ku saabsan meelaha aasaasiga ah ee xiisaha u ah booqdayaasha.
Qulqulka 'Marché Bonsecours' ee Old Montréal
Old Montréal waxaa ku jira aqlabiyadda dhismooyinka taariikhiga ah, badankoodna waxay ka soo bilaaban jireen qarnigii 17aad - 19aad, iyo matxafyo badan. Habeenkii dhowr dhismeyaal ayaa si qurux badan u shidan. Buug-yaraha Xafiiska Dalxiiska ayaa dejinaya khariidad lagu socdo. Tixgeli inaad raacdo hal mar maalintii, iyo markale habeenkii.
Le Plateau waxay isku daraysaa jidadka guryaha la isku qurxiyo ee quruxda badan leh dukaamada sinta iyo cuntada.
Faras-dhismeedka hoose ee magaalada, xerada McGill, kaniisadaha, iyo matxafyada. Dhowr baloog ayaa isku xira 30 km oo arcadooyin dhulka hoostiisa ah iyo xarumo ganacsi, taasoo u oggolaaneysa socodka raaxada leh iyo dukaameysiga marka cimiladu xumaato.
Parc Jean-Drapeau, oo ah goobtii Carwada Adduunka ee 1967, ayaa hadda loogu talagalay meelaha cagaaran iyo goob weyn oo xafladaha lagu qabto. Wareegga tartanka Gilles-Villeneuve, oo ah guriga Montreal Formula 1 Grand Prix. Xeeb macmal ah, barxad weyn oo barkad leh, iyo Montreal Casino ayaa sidoo kale ku yaal gudaha ama hareeraha beerta.
The Biosphere, oo ah geodesic goob ku saleysan carwadii Adduunka ee 1967
Dhowr kiiloomitir oo Metro ah oo woqooyi u socda, Hochelaga-Maisonneuve ayaa bixisa Ciyaaraha Olombikada, Cayayaanka, Jardin Botanique, Iyo Biodôme. U oggolow afar saacadood inaad aragto afarta.
Kaniisadaha - Montreal waxay hoy u tahay afar basilicas Roman Catholic ah, dhammaantoodna waxay leeyihiin gudaha oo ka mid ah kuwa ugu caansan Waqooyiga Ameerika. Downtown Montreal waxay hoy u tahay Hadalka Afka Saint Joseph (Oratoire Saint-Joseph), kaniisada ugu weyn Kanada, Mary, Boqoradda Katidralka Adduunka (Cathédrale Marie-Reine-du-Monde) iyo Saint Patrick's Basilica (Basilique Saint-Patrick), oo loo dhisay in loogu adeego bulshada Katooliga ee Anglophone ee Montreal. In Old Montreal, ka Nore-dame basilica (Basilique Notre-Dame) ee meesha loo yaqaan 'Place d'Armes' shaki la'aan waa midka ugu caansan magaalada Montreal, waxaana adduunka oo dhan looga yaqaanaa qurxinta iyo qurxinta badan ee gudaha. In kasta oo ay yaryihiin oo aysan ahayn basilica, kaniisad kale oo xusuus ah oo ku taal Old Montreal ayaa ah Notre-Dame-de-Bon-Secours Chapel (Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours) oo u dhow Suuqa Bonsecours, oo ah kaniisaddii ugu horreysay ee laga aasaasay Montreal, taas oo caan ku ah mawduuca badda iyo qurxinta quruxda badan ee gudaha.
Tiyaatarka Rialto, 5723 ave du Parc. Tiyaatarka Rialto waa mid ka mid ah dhismayaasha ugu caansan Montreal. Qiyamkeeda quruxda badan iyo faahfaahinta xarrago leh ayaa ah wax lagu farxo. Wakhti dheer hurday oo aan la isticmaalin, hadda waa Xarunta Fanka fanka: furan oo loo dhan yahay, luqado badan iyo dhaqammo badan. Rialto waxay martigelisaa safarro, dhacdooyin, riwaayado, kooxo, iyo filimo.
Mosaicultures internationales, xilliyeed
La Ronde (xubin ka tirsan qoyska Lixda Calan), 22, chemin Macdonald (metro Jean-Drapeau). Qiimo-dhimis ayaa si fudud loo heli karaa: daasadda Coca-Cola ayaa u dhiganta $ 8 qiimo dhimis tikidh kasta oo raacitaan ah.
Isboortiga dalka gudbaya
Xilliga jiilaalka, jardiinooyin badan ayaa bixiya suurtagalnimada in lagu sameeyo barafka isboortiga waddooyinka la hagaajiyay.
Parc regional de l'Ile-de-la-Booqasho - Kireynta ski ee la heli karo
Parc du Mont-Royal. Kireynta ski-ga ee la heli karo iyo badiyaa xaaladaha barafka ugu fiican.
Parc Maisonneuve iyo Jardin Botanique - Ma jiro kiro baraf ah.
Baraf-baraf-sannadka oo dhan, 1000, rue De La Gauchetière (metro Bonaventure).
Kabaha bilaashka ah, Lac aux Castors (Beaver Lake), oo ku taal Parc Mont-Royal.
Kabaha bilaashka ah, Balliyada isku xiran ee Lafontaine Park, ee Plateau Mont-Royal.
Barafka xilliga qaboobaha, oo ku taal dekedii hore (Vieux-Port) horteeda Suuqa Bonsecours iyo jardiinooyin badan.
Wabiga fuula - Inkasta oo Wabiga Saint Lawrence uu barafoobay ku dhowaad afar ilaa shan bilood sanadka gudihiisa, marin biyoodka wuxuu u noqday magnet aficionados ee ciyaartan cusub. Si ka duwan walaalahooda ku nool badda, badmaaxiinta webiga waxay raacaan mowjadaha taagan ee biyo mareenka cusub. Saint Lawrence waxay leedahay laba barood oo waaweyn oo isboorti: Habitat 67 waxay kudhowdahay buundada udhaxeysa Montreal iyo Île des Soeurs, waa goobtii Expo 1967 iyo Montreal Casino. (Mowjadani waxaa sidoo kale loo yaqaan Expo 67.) Shirka 'Surf 66 Boardshop' ee 1952 rue Cabot wuxuu bixiyaa casharo.
Kayaking - Meel u dhow xeebta jardiinada ee Lasalle waxaa ku yaal Lachine Rapids. Mawjado waaweyn, biyo deg deg ah, iyo xamuul badan oo loogu talagalay kayaks. Casharo ayaa laga heli karaa goobta qormadan weyn ee uu ka sameeyay jasiiraddu. Tartamada sanadlaha ah ee loo yaqaan 'rooo' tartamada "Big Joe" (wali waxaa loogu yeeraa "Hoosudhaca Wheel" ee ardayda hore). Mawjadaha kale ee caanka ah ee ku cayaaro xawaaraha ku socda webiga St. Lawrence waa, Istambul iyo Constantinople, Ahraam, Jeex iyo Laad, Black iyo Decker, iyo HMF oo ku taal dhinaca kale ee jasiiradaha. Kuwa doonaya wax yar oo ka mid ah degdegga adrenaline, waxaa had iyo jeer jira Bunny Wave (La Vague a Guy) oo u dhow wadiiqada baaskiilka ee Park Rene Lesvesque. Ku garaacista isla xawaarahaas sidoo kale waa ikhtiyaar xiiso leh.
Khariidad is-dhexgal ah oo ku saabsan isku-xirka wadada wareegga ayaa laga heli karaa websaydhka Vélo Québec. Gaar ahaan meelaha wanaagsan ee baaskiilka lagu socdo iyo barafka lagu ciyaaro waxaa ka mid ah:
Parc Maisonneuve - Beer weyn oo wadooyinkeedu siman yihiin.
Qaybta Jean-Drapeau - Gaar ahaan Île Notre-Dame oo ku sugan jidka loo yaqaan 'Formula One track': waa aragti fantastik ah oo ku saabsan biyaha oo dhan illaa magaalada Montreal.
Kanaalka Lachine - Wadooyinka Baaskiilku waxay ka baxaan galbeedka galbeedka Dekedda.
Rivière-des-Prairies - Waxaad ku raaci kartaa jasiiradda Montreal galbeed ilaa bari webiga waqooyiga Montreal. Bogag badan waxay leeyihiin aragtiyo aan caadi ahayn. Joogsiga Perry Island waa waajib.
Fagaaraha Saint-Louis, geeska rue Saint-Denis iyo rue Prince-Arthur, wax yar woqooyi ka xigta rue Sherbrooke (metro Sherbrooke). Beer yar oo soo jiidasho leh oo leh geedo sharaf leh iyo ilo qurux badan, oo lagu dhejiyay guryo qurux badan oo saddex dhinac ah (Machadka Farsamooyinka Hoteelka ee iskuulka hudheelka ee Quebec ayaa ah kooxda afraad). Tani waxay ahayd goobtii ugu horreysay ee kaydka biyaha ee Montreal.
Qaybta Jean Drapeau - Carwadii hore ee Expo 67, Parc Jean Drapeau waxay ku baahsan tahay laba jasiiradood (Ile Ste-Helene iyo Ile Notre Dame) oo ku yaal wabiga Saint Lawrence. Axadaha xagaaga, ku soo biir kumanaan Montrealers ah oo ku damaashaadaya qoraxda iyo muusikada banaanka Piknik Électronique. Dadku waxay ku raaxaystaan ​​ku kaxaynta baaskiil agagaaraha wadada loo maro 'Circuit Gilles Villeneuve track' oo ku taal Île Notre Dame. La Ronde iyo Montreal Biosphere waa halkaan. (metro Parc Jean Drapeau)
Parc Lafontaine, laga bilaabo avenue Papineau ilaa avenue du Parc Lafontaine iyo laga bilaabo rue Rachel ilaa iyo rue Sherbrooke. Kabaha barafka ee harada xilliga qaboobaha, baseball, boules, iyo tiyaatarka banaanka xagaaga. (metro Sherbrooke)
Taallo Georges-entienne Cartier. Parc du Mont-Royal
Parc Maisonneuve iyo Jardin Botanique de Montreal (laga bilaabo rue Sherbrooke ilaa boulevard Rosemont iyo laga bilaabo Boulevard Pie-IX ilaa wadada Viau (metro Pie-IX ama Viau)). Jardin Botanique waa mid ka mid ah jardiinooyinka dhirta ugu waaweyn adduunka waxayna leedahay Beerta Koowaad ee Quruumaha, Cayayaanka, Guriga Geedaha, iyo 16 beerood iyo mawduucyo kala duwan ah
Parc du Mont-Royal. Waqooyiga wadada des Pins, inta udhaxeysa avenue du Parc iyo chemin de la Côte-des-Neiges. Beertan quruxda badan, baaxadda weyn ee magaalada ayaa dusha ka saaran “buurta” (oo dhererkeedu yahay 232 m (761 ft), waxay la mid tahay buur) oo iska indhatirta dhammaan Montreal magaceedana u bixisa magaalada. Waxaa naqshadeeyay Frederick Law Olmsted, abuuraha Central Park iyo Prospect Park oo ku yaal New York, beerta waa mid qurux badan oo la heli karo, waxayna leedahay boqolaal nook iyo crannies si ay u sahamiyaan. Baaskiil ballaaran oo tartiib tartiib ah 8-km (5-mayl) iyo waddo lugeynaya ayaa ka bilaabanaya Taallada Georges-Étienne Cartier (oo ku taal Avenue du Parc, kana soo horjeedka dhammaadka galbeed ee rue Rachel, halkaas oo waddada baaskiilku ku sii socoto), oo ku wareegeysa hareeraha buurta oo ku soo gabagabeynaya Belvédère (fiirinta) iyo Chalet Mont-Royal, oo leh aragtiyo cajaa'ib leh oo ku saabsan magaalada hoose, wabiga St. Lawrence, iyo Bariga Magaalada. Belevedere iyo Chalet sidoo kale waxaa laga heli karaa bartamaha magaalada jaranjarada cusub ee dib loo soo celiyey, iyada oo loo marayo marinka dusha sare ee Peel Peel. Jidadyo badan oo yar-yar iyo jidad dhaadheer ayaa dhexmara jardiinka. Booqdayaasha caajiska ah, ama kuwa dhaqdhaqaaqoodu xadidan yahay, waxaad ku raaxeysan kartaa muuqaal qurux badan oo ka imanaya buurta adoo raacaya wadada baska 11, oo istaagta feejignaanta Chemin Xuska, iyo Beaver Lake. Axad walba inta lagu jiro xagaaga, kumanaan dad ah ayaa isugu yimaada taallada Avenue du Parc si ay ugu raaxaystaan ​​jam-ka weyn ee tam-tam.
Qaybta Jeanne-Mance, oo ku teedsan avenue du Parc, avenue Duluth (oo leh fiditaan yar oo dhanka koonfureed ilaa avenue des Pins), rue de l'Esplanade iyo wadada Mont-Royal, oo si toos ah uga soo horjeedda Parc du Mont-Royal. Waxaa ku jira maxkamadaha teniska, dheeman baseball / softball dheeman, garoon kubbadda cagta / kubbadda cagta, garoomada kubbadda laliska ee xeebta, goob barafka lagu ciyaaro xilliga jiilaalka. Sidoo kale goob aad u caan ah ey-socodka.
Parc de l'Ile-de-la-Booqasho. Rue d'Iberville iyo Boulevard Gouin, (metro Henri-Bourassa, Bus 69 east). Beertan gobolku waxay ku taal hareeraha Rivière-des-Prairies. Meel xasilloon oo raaxo leh oo qadad lagu qaato oo galabtii lagu nasto. Meel fiican oo laga bilaabo safarka baaskiil ee webiga.
Montreal waxay leedahay xaflado kala duwan oo jahwareer leh, oo u dhexeeya hal maalin carwooyinka carwooyinka illaa wax soo saar ballaaran oo caalami ah oo soconaya labo toddobaad ama ka badan. Guud ahaan waxaa la qabtaa xagaaga iyo deyrta, inkasta oo ay sii kordhayaan waxaa laga heli karaa sanadka oo dhan. Waa kuwan qaar ka mid ah kuwa waaweyn:
Kaliya Qosol Festival. Bandhig faneed leh seddex qaybood oo waaweyn: bandhigyada lacagta lagu bixiyo ee gudaha (badanaa istaaga, laakiin had iyo jeer maahan), tiyaatarka / majaajillada waddooyinka oo bilaash ah, iyo bandhig yar oo filim loo yaqaan Comedia. Luulyo.
Shakespeare-ee-Park-ka. Xilliga xagaaga ee jardiinooyinka ku xeeran Montreal, Tiyaatarka Repercussion wuxuu ku soo bandhigayaa bandhigyo bannaanka Shakespeare ciyaaro bilaash ah.
Festival du Monde Arabe. Bishii Nofeembar, xaflad sannadle ah oo loogu dabbaaldego muusiga iyo dhaqanka dunida Carabta ayaa ka dhacda Montreal. Dad badan oo carbeed oo riwaayadaha sameeya, kuwo dhaqameed iyo kuwa casri ah, ayaa masraxa qaada.
Festifaalka Mondiale de la bière, 2018: gudaha - Palais des congrès de Montréal, 201 Viger Street West (Saldhigga Place-d'Armes métro); bannaanka - Palais des congrès Esplanade, de la Gauchetière Street oo u dhexeysa Cheneville iyo Côté Street. Juun 6-9, 2018: 12: 00-23: 00. Sanadle, horraanta Juun: Shan maalmood oo ah dhadhaminta biirta, khamriga, iyo cabbitaannada kale ee ka socda dhammaan Quebec, Kanada iyo meelo ka sii fog. Dhacdadii 2017 waxay ku faantay 529 beers oo kala duwan oo ka kala yimid 9 dal. Ma jiro lacag galitaan (laakiin waxaad ku iibsan kartaa bakeeriga muunad-qaadashada xusuusta qiyaastii $ 8) iyo shay-baarka sida caadiga ah waxaa lagu iibiyaa tikidhada 2-8 ($ 1 tigidh) muunad 150-200 ml ah. Waxa kale oo jira bandhigyo muusig ah oo la qorsheeyey iyo maqsinno cunto. Bandhigu wuxuu mashquul ku noqon karaa waqtiyada ugu sarreeya (Jimcaha iyo Sabtida fiidnimada ee dhacdada), sidaas darteed waxaa lagugula talinayaa inaad goor hore timaadid si looga fogaado safaf dhaadheer oo suuragal ah.
Montréal iyo lumière. Arrin ugub ah oo xilliga qaboobaha ah, oo isku dayaysa in loo beddelo sixirka ciida magaalada xilliga qabow. Waxaa ku jira saddex qaybood oo waaweyn oo waxqabadyo ah: cunno iyo khamri, farshaxan faneed, iyo hawlo bilaash ah gudaha iyo dibaddaba. Febraayo.
Tartan Ciyaaraha Caalamiga ah ee Montreal. Beerta madadaalada ee La Ronde (oo ku taal Parc Jean-Drapeau). Bandhig-faneedkan cajiibka ah wuxuu ka kooban yahay bandhigyo rashka oo dhererkiisu dhan yahay, oo ay weheliyaan muusig orchestral, kooxo qaran oo ka kala socda illaa toban dal oo adduunka ah. In kasta oo kuraasta kulul ay ku dhex jiraan beerta mawduuca La Ronde, rashka ayaa laga arki karaa meel kasta oo bannaan ama saqafka sare ee Bartamaha magaalada. Dadka lugaynaya waxay ka daawan karaan Buundada Jacques Cartier, oo xiran 20:00 habeenada rashka. Meel kale oo wanaagsan ayaa ah waddada loo maro galbeedka Dekedda Hore. $ 35–45 (kuraasta La Ronde, bilaash meel kasta oo kale). Sabti 22:00 laga bilaabo bartamaha Juun ilaa dhammaadka Luulyo, iyo Arbacada 22:00 laga bilaabo bartamaha-Juulaay.
Fete de St-Jean-Baptiste. Juun 24 waa fasaxa qaran ee Quebec (Qaran qaran). Fiidnimadii fiidkii, riwaayad ballaadhan ayaa ka dhacda Maisonneuve park. Kani waa bandhiga si aad u maqasho muusikada lagu sameeyay Quebec. Bilaash Sidoo kale xafladaha dariiqyada waxaa laga heli karaa magaalada oo dhan.
Bandhig Faneedka Caalamiga ah ee Farshaxanka. U heellan kor u qaadista iyo soo bandhigidda wax soo saarka ugu wanaagsan farshaxanka iyo farshaxanka warbaahinta. Bandhig tartan toban maalmood soconaya, waa munaasabadda ugu muhiimsan ee sanadlaha ah ee nooceeda ah ee adduunka. FIFA waxay xarun u noqotay fanaaniinta iyo farshaxanleyda ka socda bulshada fanka iyo filimada, iyo dadka jecel farshaxanka iyo shineemooyinka.
Bandhigga Filimka Adduunka. Bandhigu wuxuu u furan yahay dhammaan isbeddelada shineemooyinka. Qeybta korantada ee barnaamijyadeeda waxay ka dhigeysaa Bandhigga mid xiiso u leh tirada sii kordheysa ee kaqeybgalayaasha ee ka kala socda shanta qaaradood. Sannad kasta, filimo ka socda in ka badan 70 dal, oo ay ku jiraan kuwa caan ah oo filim sameeyayaal ah ayaa markii ugu horreysay la xushaa. Badanaa waxaa jira saadaalin bannaanka oo bilaash ah habeen kasta. Dabayaaqadii Ogosto ilaa horraantii Sebtember.
Fantasia (Aasiyaan iyo khiyaali). Luulyo.
Sawir + Nation (Gay iyo lesbian). Noofambar / Diseembar.
Festival du nouveau cinéma de Montréal (filim sameeyayaal cusub, jilaayaal caan ah, warbaahin cusub). Oktoobar.
Kinemaniya (Shineemo Faransiis ah oo turjumaad Ingiriis ah). Nofeembar.
Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal (documentaries). Nofeembar.
Les Rendez-vous du cinéma québécois (Shineemada Quebec). Febraayo.
Ciyaaraha la daawado
Kanada, Xeegada barafka, Isboortiga Jiilaalka ee Kanada: Xarunta Bell (Xarunta Dawanka), 1260 rue De La Gauchetière (metro Lucien-L'Allier or Bonaventure),. Mid ka mid ah hay'adaha ugu waaweyn dhaqanka Quebec. Haddii aad rabto inaad aragto ciyaar, waxay kaa caawinaysaa inaad ogaato qof tikidhada wata, maadaama ay guud ahaan wax ku iibiyaan daqiiqado gudahood iibka. Si ballaaran ayaa looga heli karaa iyada oo loo marayo wadiiqooyinka aan rasmiga ahayn iyo kuwa wax lagu nadiifiyo, laakiin u diyaar garow inaad qarxiso maadaama aysan jaban! Waxa kale oo aad heli kartaa tikidhada jaban haddii aad degan tahay hoyga dhalinyarada ee HI. Waxa kale oo aad joogi kartaa hoteelka hortiisa oo aad weydiisan kartaa degane inuu kuu iibsado tikidh haddii aadan ku sugnayn hoteelka!
Alouettes, Kubadda Cagta (Canadian Football League), Percival Molson Stadium (Stade Percival-Molson), avenue des Pins at University (isreebreebka: Olympic Stadium),. Koox awood leh xilliyadii dambe ee caadiga ahaa, Als waxay ku guuleysatay Gray Cup seddex jeer tan iyo markii dib loo abuuray 1996, oo ay ku jiraan dib-u-noqosho 2009 iyo 2010. Molson Stadium waa meel aad u fiican oo lagu arko ciyaar, laakiin tikidhadu way adkaan karaan soo ag mara. Kahor intaan la balaadhin garoonka 2009, kooxda Als waxay iibisay dhamaan ciyaartoodii guryahoodii muddo ka badan toban sano, xitaa xitaa ka dib markii ballaadhinta ballaadhistu wali tahay wax caadi ah.
Saameynta, Kubadda Cagta (kubada cagta), Garoonka Saputo (Stade Saputo) oo ku taal 4750 Sherbrooke street East iyo Viau oo ku taal Olympic Park (metro Viau),. Mid ka mid ah kooxaha ku cusub Major League Soccer, iyo kooxdii seddexaad ee horyaalka ee Canada, ayaa ku biiray MLS 2012. Noocii hore ee Impact wuxuu ahaa mid si joogto ah ugu tartama dhowr horyaal oo kala duwan (oo ay ku jiraan seddexdii seddexdii xilli ciyaareed ee ugu dambeysay ka hor inta aysan kooxdu ku biirin MLS ) ee heerka labaad ee Mareykanka / Kanada. Saamaynta mararka qaar waxay u isticmaashaa garoonka Olympic-da ee u dhow kulamada la filayo inay ku soo baxaan dadweyne aad u tiro badan oo aan caadi ahayn.
tennis - Montreal waxay martigelisaa ATP World Tour Masters 1000 dhacdo (rag) sanad kasta oo tiro aan tiro lahayn. Sannado xitaa la tiriyey, Montreal waxay martigelisaa dhacdo WTA Premier 5 ah (haween). Tartanada waxaa lagu qabtaa IGA Stadium (IGA Stade) ee Parc Jarry ee Waqooyiga Dhamaadka. Garoonka weyn ayaa xiiso gaar ah u leh taariikhiga ah taageerayaasha baseball-qayb ka mid ah fadhigeedu waa taariikhi hore ee dhabarka garoonka oo martigeliyay Montreal Expos (hadda Washington Nationals) ka hor inta aysan u guurin Olympic Stadium.
Formula 1 Grand Prix - Wareegga Gilles Villeneuve wuxuu martigaliyaa Canadian Grand Prix dhamaadka usbuuc kasta, oo leh tababar kahor iyo isreebreebka Jimcaha iyo Sabtida iyo tartanka Axadda. Munaasabadani waxay soo uruurineysaa qiyaastii 100,000 oo daawadayaal waxaana loo tixgeliyaa inay tahay orod orodyahan caan ah.
Montreal waa meel caan ah oo loogu talagalay barnaamijyada luqadda-barashada ee Faransiiska iyo Ingiriiska. Iskuulo badan ayaa diyaarsada hoy - ama qolal ama qolal waxayna ku bixiyaan barnaamijyo dhaqameed safarada magaalada iyo meelo ka baxsan. Qiimayaashu badanaa way ka sarreeyaan kuwa aan ahayn Québécois iyo kuwo sare oo wali ah kuwa aan Kanadiyaanka ahayn. Intooda badani waxay ku yaalliin Bartamaha iyo Magaalada Hore. Degdeg ah, barnaamijyo aan deganeyn waxaa sidoo kale bixiya YMCA iyo dowladda Quebec.
Montreal waxay hoy u tahay mid ka mid ah jaamacadaha ugu da'da weyn uguna caansan Kanada, Jaamacadda McGill. McGill waxaa si isdaba joog ah loogu qoondeeyey inuu yahay mid ka mid ah 20-ka jaamacadood ee adduunka ugu sarreeya, laakiin ma aha kulliyad kasta. Waa jaamacad leh sanduuq dhaqaale oo ballaadhan. Jaamacadda Concordia waa magaalada kale ee magaalada ku dhigata luqadda Ingiriiska, bariga ugu weyn magaalada Toronto, waxaana dhigta in ka badan 40,000 oo arday. In kasta oo Concordia aysan lahayn iskuul caafimaad iyo iskuulka sharciga, wali waxay leedahay iskuul ganacsi oo heer caalami ah barnaamijyadooda farshaxanka iyo sayniska ayaa ah kuwa ugu sareeya. Tiradeeda ardaydu guud ahaan way ka dhaqan badan tahay tan McGill iyo asalka iskuulka iyo sii wadida xoojinta waxbarashada dadka waaweyn waxay caan ku tahay ardayda qaan gaarka ah, maadaama ay heyso koorsooyin badan oo heerka qalin-jabinta ah habeenkii. Labada jaamacadoodba waa cilmi baaris.
The Université du Québec à Montreal (UQAM) iyo University of Montreal waxay u adeegtaa ardayda faransiiska. Université de Montréal waa jaamacadda labaad ee ugu weyn luuqada faransiiska aduunka, ka dib Sorbonne ee Paris waana mid ka mid ah hay'adaha ugu waaweyn ee cilmi baarista Kanada. Université de Montréal waxay leedahay laba iskuul oo xiriir la leh, Polytechnique Montréal (injineernimada), iyo HEC Montréal (iskuulka ganacsiga) oo bixiya shahaadada koowaad iyo tan sare.
Laval University iyo Université de Sherbrooke sidoo kale waxay leeyihiin xarumo kuyaal aagga Montreal.
Jaamacad kasta, marka laga reebo Laval, waxay magaceeda ku amaahdaa metro istaag si ay u muujiso goobta ugu dhow jaamacadda. Tusaale ahaan, xarunta tareenka dhulka hoostiisa mara ee Guy-Concordia, isgoyska Rue Guy iyo boulevard de la Maisonneuve ouest, wax aan ka badnayn laba daqiiqo ayey u jirtaa jaamacadda magaceeda la yidhaa (Concordia).
Maaddaama Montreal ay ku sugan tahay gobolka Quebec, oo leh siyaasaddeeda soogalootiga u gaarka ah, kuwa doonaya inay ka shaqeeyaan Montreal waa inay maraan laba geeddi-socod, marna dawladda Quebec, ka dibna ugu dambayn dawladda Kanada. Haddii aad ka shaqeysid shirkad ajnabi ah oo leh xafiis Montreal, waxaad raadin kartaa wareejin. Waxaad sidoo kale shaqo ka raadin kartaa loo shaqeeyaha Montreal waxayna kugu kafaala qaadi karaan fiisada shaqada ku meel gaarka ah. Haddii aad tahay shaqaale xirfad leh (eeg websaydhka CIC) waad ku soo haajireysaa iyada oo ku saleysan xirfadahaaga gaarka ah.
Awoodda luqadda Faransiiska waa shuruud shaqooyinka badankood, maaddaama ganacsiyada looga baahan yahay sharciga gobolku inuu ku salaamo una adeego macaamiisha Faransiiska. Shaqooyinka aan u baahnayn awoodii hore ee luqadda Faransiiska inta badan waa shaqooyinka IT-ga, iyo shaqooyinka tacliinta ee Montreal labada jaamacadood ee Anglophone. Dowlada gobolka Quebec waxay bixisaa koorsooyin luuqada faransiiska ah oo bilaash ah oo loogu tala galay qurbajoogta wadanka ku cusub iyo muhaajiriinta aan kuhadlin wax faransiis ah, waxaana si weyn lagugula talinayaa inaad iska qorto mid kamid ah koorsooyinkan isla marka aad timaado si aad ucaawiso laqabsashadaada bulshada.
Heshiiska Ganacsiga Bilaashka ah ee Waqooyiga Ameerika (NAFTA) wuxuu u oggolaanayaa xirfadlayaal xirfadlayaal u ah Mareykanka iyo Mexico inay helaan fiisaha shaqada ee Kanada haddii ay aqoon u leeyihiin xirfadaha qaarkood. Websaytka Adeegyada Qunsuliyadaha Mareykanka wuxuu bixiyaa liis casri ah oo ku saabsan xirfadaha u qalmidda.
Haddii aad tahay muwaadin Mareykan ah oo jira 18-30 isla markaana ah arday waqti-buuxa ah, waxaad ka heli kartaa fiisaha shaqada ee Kanadiyaanka ah oo shaqeynaya muddo lix bilood ah iyada oo loo marayo BUNAC. Ardayda ka socota Faransiiska, Ingiriiska, New Zealand, iyo Australia sidoo kale waxay ka faa'iideysan karaan barnaamijyada shaqada ee BUNAC. Sidoo kale, haddii aad shahaado ka hesho jaamacad Kanada ku taal, waxaad xaq u leedahay inaad ku sii jirto Montreal oo aad shaqeyso illaa hal sano.
Qof kasta oo kale, websaydhada Socdaalka Kanada (CIC) waxay sharraxaysaa dhowr siyaabood oo ajaanibtu si sharci ah uga shaqeyn karaan Kanada.
Shaqooyinka ardayga waxaa ka mid ah haynta ilmaha, rinjiyeynta xagaaga, iyo guuritaanka alaabta guriga bisha Juun. Jaamacadaha McGill iyo Montreal waxay had iyo jeer raadinayaan maadooyin cilmi baaris ah sidoo kale Montreal shirkado badan oo biotech -ka ah. Montreal waxay kaloo leedahay Xarumo wicitaan oo badan, kuwaas oo si joogto ah u raadiya inay shaqaaleeyaan shaqaale cusub oo bixiya saacado shaqo oo dabacsan.
Sharoobada Maple ee Old Montreal.
In kasta oo dhaqaalaha Montreal uu sare u kac ku yimid, haddana magaaladu wali si la yaab leh ayey u awoodi kartaa marka la barbar dhigo magaalooyinka kale ee waaweyn ee Kanada iyo Mareykanka. Dukaameysiga Montreal wuxuu u dhexeeyaa dukaamada miisaaniyadda ee loo yaqaan 'eclectic budget' ilaa moodada ugu dambeysa, oo leh muuqaal ballaaran oo u dhexeeya.
Rue Ste-Catherine, oo u dhexeeya rue Guy iyo boulevard St-Laurent, waxay leedahay qaybo badan oo waaweyn iyo dukaamo silsilado ah iyo sidoo kale dhowr suuqyo waaweyn. Avenue Mont-Royal waxay leedahay xamuul madadaalo leh iyo dukaamo dharka lagu qurxiyo oo laga bilaabo boulevard St-Laurent ilaa rue Saint-Denis iyo boorso isku dhafan oo dukaamada xaafadaha ah, dukaamo rikoodh ah oo la isticmaalay, iyo dukaanno qurux badan leh oo u socdaalaya dhanka bari oo loo maro waddada Papineau. Rue St-Viateur waa mid ka mid ah waddooyinka ugu xiisaha badan magaalada, iyada oo ganacsiyo kala duwan oo la yaab leh ay ku xardhan yihiin jidka u dhexeeya Boulevard St-Laurent iyo Avenue du Parc.
St-Laurent ayaa weli ah mid kamid ah jidadka waaweyn ee wax laga gato magaalada, in kabadan ama ka yar dhererkeeda oo dhan. Qiyaastii wax walba ayaa laga heli karaa halkaas, iyada oo leh qaybo kala duwan oo leh kooxo ganacsi oo kala duwan (raashinka Aasiya iyo guryaha guryaha ee u dhow de La Gauchetière, elektaroonig raqiis ah oo wax yar ka sii dheer, sariibadaha sinta ee u dhexeeya Prince-Arthur iyo Mount Royal, wax kasta iyo wax kasta oo Talyaani ah oo u dhexeeya Saint- Zotique iyo Jean-Talon). Rue Sherbrooke ouest, galbeedka Autoroute Décarie, waxay leedahay soo jiidasho sii kordheysa oo xiiso leh oo u badan ganacsiyada ku wajahan cuntada. Suuqa Jean-Talon, maxalliga u dhow isgoyska Jean-Talon iyo St-Laurent, wuxuu leeyahay noocyo kala duwan oo wax soo saar maxalli ah iyo cunno (sharoobada maple, farmaajo, iwm.) Qiimo aad u wanaagsan.
Alaabada elektarooniga ah, dukaanka silsiladda ugu weyn waa BestBuy. Waxa kale oo aad ka heli kartaa kuwa yaryar oo badan Boulevard St-Laurent (inta u dhexeysa Ontario iyo Sherbrooke).
Tuulada des Valeurs, 2033 Pie IX (Métro Pie IX). Waxay leeyihiin dukaamo ku yaal gudaha iyo dibedda Montreal
Le coffre aux trésors "Chainon", 4375 Boulevard St Laurent (Métro Sherbrooke).
Qaabka Fikradda L'Aubainerie, 1490, av du Mont-Royal E (metro mont royal).
Qaar ka mid ah dukaamada qalabka militariga ayaa ku dukaameysan agagaaraha St-Laurent iyo Ste-Catherine.
Socodka iyo dibedda, sidoo kale waxaad leedahay ikhtiyaarro badan
Mec, 8989, boulevard de l'Acadie. Iskaashatada Qalabka Dhismaha ayaa iskaashi la leh shaqaale si fiican u yaqaan dukaamada alaabada.
Ciyaaraha Altitude, 4140 Saint-Denis St. (Métro Mont-Royal).
Dukaamada Trendier waxaa laga heli karaa ilaa Saint-Denis, waqooyiga rue Sherbrooke iyo koonfurta wadada Mont-Royal est, iyo rue Saint-Laurent (ilaa woqooyi ilaa Bernard). Tan dambe waxay noqoneysaa mid sii kordheysa, sidaa darteed kala duwanaanta wax soo iibsiga ayaa ah mid aad u isbedbeddelaya oo cufnaanta ka hooseysa maaddaama mid woqooyi uga sii jeedo Mont-Royal. Rue Sherbrooke waxay leedahay dhowr dukaanno heer sare ah (gaar ahaan Holt Renfrew) iyo farshaxanno farshaxan ganacsi oo ku yaal xariiq gaaban oo soconaya qiyaastii Jaamacadda McGill ee galbeedka illaa Guy. Galbeed ka fog, Sherbrooke waxay goysaa Greene Avenue ee Westmount, oo leh dukaan tafaariiq gaaban, laakiin raaxo leh. Avenue Laurier, oo udhaxeysa St-Laurent iyo darafkeeda galbeed, waa mid kamid ah meelaha ugu muhiimsan magaalada ee wax lagu cuno laguna cunteeyo qaab heer sare ah, in kasta oo ay weli jiraan dhowr meelood oo la awoodi karo halkan iyo halkaas.
Alaabta guriga iyo waxyaalaha qadiimiga ah
Boul. St-Laurent, oo ah kutlada dukaamada alaabada guryaha lagu dhammeeyo. Waxay ka bilaabataa qiyaastii geeska rue Marie-Anne waxayna caan ku tahay meesha u dhaxeysa rue Marie-Anne iyo wadada Mont-Royal, oo leh sparser, laakiin wali dukaamo xiiso leh ilaa woqooyiga ilaa Saint Saint Viateur. Buuts-ka qadiimiga ah waxay ka heli doonaan dukaamo xiiso leh magaalada oo dhan, laakiin waxay rabaan inay xaj gaar ah u maraan rue Notre-Dame Ouest, markaad u socoto bariga dhanka wadada Atwater. Rue Amherst, oo ku taal Tuulada Gay, ayaa sidoo kale leh uruurin weyn oo ka mid ah ganacsatada qadiimiga ah.
Montreal waa goob cunnada lagu kariyo oo loogu talagalay cuntada Xalaasha ah. oo waxay leedahay xulashooyin kaladuwan oo kaladuwan oo cunto ah, laga bilaabo cashada iyo cuntada degdegga ah illaa maqaayadaha qowmiyadeed ee jaban ilaa haute cunto.
Maaddaama Montreal ay leedahay dad aad u kala jinsiyad duwan, waxay leedahay maqaayado qowmiyado kala duwan oo tayo leh.
Hindida: Bulshada Hindida ah ee ku nool Montreal waxay ku yaalliin agagaarka Parc metro station halkaas oo laga heli karo maqaaxiyo badan oo Hindi ah. Tusaale ahaan waa Bombay Mahal.
Beershiyan: Makhaayad laga cunteeyo oo laga cunteeyo oo laga leeyahay dalka Iiraan ayaa lagu magacaabaa Byblos cafe.
Makhaayadaha Carabiga Xalaal ayaa ku yaal dhibco dhan Montreal.
Si aad u iibsato cuntadaada ama wax soo saarkaaga gobolka, suuqa dadweynaha ee Jean-Talon, 7075 avenue Casgrain (metro Jean-Talon ama De Castelnau), waa meesha la tagayo. Furan maalin kasta 08: 00-18: 00, suuqa ayaa si gaar ah xusid mudan xulashadeeda wax soo saar. In kasta oo aysan si adag uga mid ahayn suuqa, dukaamada badan ee ku xardhan dhinacyada waqooyiga iyo koonfurta ayaa si yaab leh u dhammaystiray xulashooyinka farmaajo, hilibka, iyo wax uun la cuni karo. Wadooyinka ku hareeraysan ayaa ah kuwo aad u dhadhan fiican oo Talyaani ah waxayna leeyihiin dukaamo raashin oo aad u fiican, kawaanleyda, rootiyada, iyo maqaayadaha.
Magaalada oo dhan, Suuqa Atwater sidoo kale waa heer sare, in kasta oo uu aad uga duwan yahay (aadna uga yar yahay) Jean-Talon. Halkan, waxaad ka heli doontaa kawaanleyda ugu fiican magaalada, iyo xulashada wanaagsan ee jiiska, kalluunka, iyo wax soo saarka. Waxay ku taal wadada Atwater, oo koonfurta ka xigta saldhiga Notre-Dame Lionel-GroulxHalkee laga joogaa Montreal
Socdaalka miisaaniyadeed, Montreal waxay siisaa hoteelo dhalinyaro oo leh qolal hurdo leh ama qolal gaar loo leeyahay iyo sariir miisaaniyadeed iyo quraac (mararka qaarkoodna quraacdo aad u yar). Uruurinta ugu badan ee hudheellada miisaaniyadda waxay ku yaalliin xaafadda Laatiinka, waddooyinka bariga bari ee Berri-UQAM metro iyo boosteejada basaska ee magaalada dhexdeeda. Old Montreal waxay leedahay laba hostel oo tayo leh, laakiin wax badan ayaad bixin doontaa si aad halkaas u joogto. Montreal sidoo kale waa magaalada leh xubnaha ugu badan ee Couch Surfing, sidaa darteed way fududahay in la helo marti-geliye maxalli ah oo martigeliya dhowr habeen.
Fursadaha dhexdhexaadka ah waxaa ka mid ah hudheelada silsiladda hoose ee "g totes", guryaha martida oo ka bilaabma hal qol oo dabaq ah iyo guryo taariikhi ah oo qurux badan leh oo leh saddex illaa shan qol. Gîtes waxaa badanaa laga helaa xaafadaha badan ee la deggan yahay sida Plateau.
Dhamaadka sare, afar iyo shan xiddigood oo raaxo iyo hudheelo hudheello ah ayaa inta badan ku urursan Old Montreal iyo Downtown.
Montreal waxay hoy u tahay afar jaamacadood oo waaweyn iyo iskuulo yaryar oo tiro yar. Ardaydu waxay si joogto ah u kireeyaan guryaha bilaha xagaaga.
Montreal waxay leedahay afar nambar oo heer degmo ah: 514-ta dheer, tan cusub ee 438, 450 iyo 579 ee agagaarka, aagagga jasiiradda ka baxsan. Lambarka aaggu waa in loo adeegsadaa wicitaanada oo dhan: xitaa haddii ay tahay isla kan aad ka soo wacayso iyo xitaa haddii aad ka soo wacayso deriskaaga. Tusaale ahaan, inaad ka wacdo lambar 514 oo ka socda gudaha 514, isticmaal "514-123-4567". Wicitaanka isla tirada masaafada dheer waxay noqonaysaa 1-514-123-4567.
Cafe-ka Internetka ee Montreal
Dukaammada nuqulku waxay badanaa leeyihiin boosteejooyin internet ah, sidoo kale makhaayado badan iyo dukaamada buugaagta qaarkood. Shirkadda taleefanka ee Bell waxay rakibtay boosteejooyinka internet-ka ee dadweynaha (kaash ama kaararka deynta) xarumaha McGill iyo Berri-UQAM metro.
Waxa kale oo jira makhaayado cyber / internet oo muddo dheer taagnaa (laga jaray qaybta kafateeriyada) sida Dagaalada 24 meelo badan oo Montreal ka mid ah oo ay ku jirto mid heer mezzanine ah oo laga galo wabiga rue Guy ee magaalada Guy-Concordia metro.
Dabcan, marin u helka internetku waa kan ugu fiican nooca internetka. Ururka Île Sans Fil wuxuu ku bixiyaa internetka bilaa lacag la'aanta ah maqaayadaha iyo meelaha kale ee magaalada oo dhan. Ka raadi warqad dhejiska bannaanka kaqeybgalka kaqeybgalayaasha. Eaton Center faras magaalaha waxay ku siisaa marin bilaa lacag la'aan ah maxkamada cuntada.
Sidoo kale, Grande Bibliothèque (Maktabadda Weyn) waxay leedahay boosteejooyin internet oo fara badan oo bilaash ah: waxaad ka heli kartaa kaarka maktabadda (bilaash dadka deggan Québec oo leh caddeyn cinwaan) si aad ugu isticmaasho halkaas.
Sanduuqa boostada ee 'Red Canada Post' waxaa laga helaa inta badan jidadka waaweyn. Xafiisyada boosta ayaa badanaa ku dhex yaal farmashiyaasha: raadi astaanta Canada Post.
Nabdoonow oo iska ilaali khayaanada Montreal
Wixii gurmad ah wac 9-1-1.
In kasta oo Montreal ay tahay magaalada labaad ee ugu weyn Kanada, haddana waxay la wadaagtaa heerarka dambiyada rabshadaha yar ee Kanada ka dhigaya mid xasilloon. Si kastaba ha noqotee, dambiyada hantida, oo ay ku jiraan xatooyada baabuurta, ayaa si aad ah u sarreeya: hubi inaad albaabbadaada xirtid oo aad agtayda ku haysato waxyaabahaaga qiimaha leh. Ka taxaddar dheeraad ah haddii aad rabto inaad booqato Montréal-Nord ama Saint-Michel. Xaafadahaan ayaa ah kuwa ugu xun magaalada rasaaseyna kama dhicin meelahaan. Si kastaba ha noqotee, wax yar ayaa u ah dalxiisayaasha inay sameeyaan oo uma badna inay shilal ku galaan.
Qeyb ka mid ah marinka hoose ee magaalada Montreal ee Sainte-Catherine ayaa la oran karaa waa qeybta ugu wanaagsan magaalada, gaar ahaan bariga Place des Arts. Waxaa jira dad hoylaawayaal ah oo iskaashanaya xilliyada kuleylaha iyo deyrta. In kasta oo badankood ay edeb leeyihiin, haddana waxaa jira qaar ka dagaal badan. Ka fogow shakhsiyaadka ku meeraysta dariiqyada u muuqda kuwa sakhraansan. Wadadu waa tan ugu halista badan markay tahay 03:00 markay tahay markii naadiyada iyo baararka la xidhayo ay dadkoodii sakhraansanaa ku daadiyaan wadada. Waxaad sidoo kale la kulmi kartaa jeebado mararka qaarkood dhillooyinka jidadka ah, gaar ahaan agagaaraha naadiyada dharka.
Montreal, jeeb-wadayaasha kuma badna, laakiin isha ku hay waxyaabaha markaad daawaneysid bandhigyada waddooyinka ee Old City ama dadka kale.
Haddii aad ka walwalsan tahay nabadgelyada metro-ga, isticmaal gaariga ugu horreeya ee mitrooga halka uu darawalku joogo. Isdhexgalka xaaladaha degdegga ah waxay saaran yihiin gaari kasta oo metro ah. Waababka taleefanka degdegga ahi waxay ku yaalliin barxad kasta oo ka mid ah nidaamka mitrooga, taas oo guud ahaan ammaan ah. In kasta oo tilmaamaha qoran ay ku kala qoran yihiin Ingiriis iyo Faransiis, ogeysiisyada badankood (inta badan dib u dhaca) waxay ku qoran yihiin Faransiis kaliya markaa haddii aad u malaynayso inaad wax ka maqashay ogeysiiska oo saameyn kugu yeelan kara, kaliya isku day inaad weyddiiso rakaabka kale tarjumaad.
STM waxay bixisaa “inta u dhexeysa joogsiyada” (wax ka qabasho la'aan) Adeeg u ogolaanaya haweenka kaligood socdaalaya habeenkii inay baska ka degaan inta u dhaxaysa laba istaag oo si joogto ah loogu talagalay haddii darawalka basku dareemo inay baska si nabadgelyo ah u joojin karaan.
Dadka lugeynaya iyo baaskiilada wadayaashu waa inay si gaar ah taxaddar u yeeshaan. Marar dhif ah ayaa la xurmeeyaa marinnada la maro. Wadayaasha baabuurtu waxay xaqirayaan guud ahaan dadka lugaynaya, gaar ahaan markay isku dayayaan inay midig uga leexdaan isgoyska.
Wasps waa khatar aad u badan inta lagu jiro dhererka xagaaga. Tixgeli inaad u qaaddid khalka qofkaaga haddii ay dhacdo wax ku dhufanaya si ay uga caawiso inay dhexdhexaad ka noqoto nabarka. Haddii kale, hoos eeg haddii aad xasaasiyad ku leedahay isbitaalka kuugu dhow.
Montreal inta badan waa baraf iyo qabow xilliga qaboobaha, ka taxaddar adigoo labbisan dharka si habboon xaaladaha isla markaana xusuusnow baraf ama baraf wakhti kasta oo aad gaari wadid ama socoto. Banaynta wadada ee barafka guud ahaan waa mid waxtar leh. Kulayradu waa kuwo diirran oo kululeya oo noqon kara kuwo qoyan. Ku hareeraynta wabiyada ayaa ku darsanaya saameyntan.
Isbitaalka ugu dhow ee garoonka diyaaradaha Pierre Elliott Trudeau waa Isbitaalka Guud ee Lakeshore oo ku yaal 160 avenue Stillview ee Pointe-Claire. (+1 514-630-2225)
Isbitaalka guud ee Montreal wuxuu ku yaal 1650 aed Cedar. (+1 514-934-1934)
Isbitaalka Jaamacadda McGill (Glen site) (MUHC) wuxuu ku yaal 1001 Decarie Boulevard (+ 1-514 934-1934).
Isbitaalka Guud ee Yuhuudda wuxuu ku yaal 3755 rue Côte Ste-Catherine. (+1 514-340-8222)
Haddii aadan haysan Caymiska Caafimaadka ee Quebec, diyaar u ahaaw inaad ku bixiso kaarka deynta albaabka maadaama aysan aqbalin caymiska socdaalka (laakiin dib ayaa laguugu soo celin doonaa markii aad ku noqoto gurigaaga). (+1 514-630-2225)
Dhowr cisbitaal ayaa ku bixiya adeegyo ku baxa Faransiiska iyo Ingiriiska.
Masar, 1000 De La Gauchetiere Ouest,, fax: + 1 514 866-0835. 09: 00-15: 30.
Greece, 1170 Place du Frere Andre,, fax: + 1 514 875-8781.
United States, 1155 rue Saint-Alexandre,, fax: + 1 514 398-0973.
GoAbroad.com waxay leedahay liis garayn dhammaystiran dhammaan qunsuliyadaha ku yaal Kanada oo ay ku taxan yihiin waddan tilmaamaya magaalooyinkee qunsuliyad ku leh. Macluumaadka xiriirka qunsuliyadda, cinwaanka, taleefanka, e-maylka fakiska iyo bogga internetka, ayaa lagu daray.
Gazette waa magaalada-luuqadda Ingiriisiga maalin kasta.
Haddii aad haysatid xoogaa Faransiis ah, garaac bogga voir.ca ee loogu talagalay dib u eegista makhaayada wanaagsan iyo muuqaalka guud ee waxa dhacaya.
Sida inta kale ee Quebec, siyaasada luuqada iyo gobanimada Quebec waa arimaha lagu muransan yahay Montreal. Ha u maleynin in dhamaan dadka reer Kanada ee reer Faransiisku ay taageersan yihiin ka go'itaanka Quebec iyo Kanada in badan (gaar ahaan labada luqadood ee Montreal) ayaa ka soo horjeeda. Haddii aad runtii rabto inaad kala hadasho mowduucyadaas dadka deegaanka, hubi inaad si fiican u warqabto. Wali way ka ammaan badan tahay in laga fogaado mawduuca, maadaama ay weli tahay arrin dareen badan leh. Isticmaal caqli wanaagsan oo xushmad leh.
Luqadda ugu weyn ee Montreal, sida inta kale ee Quebec, waa Faransiis. Isku dayga adeegsiga luqadda ayaa ah hab weyn oo lagu muujiyo ixtiraamka dadka maxalliga ah, haddii ay ku hadli karaan iyo haddii kaleba inay ku hadli karaan Ingiriisiga, xitaa haddii aad maamuli karto oo keliya dhowr eray oo leh lahjad aad u xoog badan. Si kastaba ha noqotee, Montreal waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah magaalooyinka adduunka ugu luqadda badan iyadoo leh deggeneyaal badan oo afkooda koowaad yahay Ingiriisiga, waxaadna inta badan maqli doontaa koodhadhka dadka maxalliga ah ee u beddelaya Faransiiska iyo Ingiriisiga markii aad wadahadal la leedahay. Haddii shaki jiro, waxaad u baahan kartaa inaad ku furto "Bonjour!" (Maalin wacan) oo arag luqadda loo adeegsado jawaabta. Waxay u badan tahay in lagugu jawaabi doono Ingiriis, haddii lahjadaada Faransiiska aysan u muuqan mid maxalli ah. Isku day inaadan xanaaqin haddii aad isku dayeyso inaad ku hadasho Faransiiska oo dadka maxalliga ahi kuugu jawaabaan Ingiriis. Maaddaama inta badan Montrealers ay ku hadlaan labada Faransiis iyo Ingiriisi, waxay si fudud isugu dayayaan inay wax kuugu fududeeyaan.
Dad badan oo ka shaqeeya dalxiiska iyo warshadaha adeegga ayaa gebi ahaanba ku hadla laba luqadood iyada oo aan lahjad lahayn. Laakiin ha ku kaftamin dadka Faransiiska ah (gaar ahaan maadaama Francophones-ka Montreal ay u badan yihiin Québécois oo ay la socdaan wax yar oo Acadiens iyo Franco-Ontariens ah, dhammaantoodna waxay u haystaan ​​inay ka duwan yihiin Faransiiska Faransiiska iyo midba midka kale). Sidoo kale, ha u qaadan in dhammaan Québécois ay yihiin Francophones. Montreal waxay leedahay beel muhiim ah oo ku hadasha Ingiriisiga oo taariikh dheer ku leh Quebec iyo soogalooti badan oo luqadooda koowaad aysan aheyn Ingiriis iyo Faransiis ("Allophones").
Sidoo kale eeg Quebec # Hadal, Quebec # Ixtiraam iyo buugga weedhaha Faransiiska.
Montreal waxay ka dhigeysaa marin aad u wanaagsan booqashada magaalooyinka kale iyo meelaha laga tago ee ku yaal Quebec iyo waqooyiga Mareykanka. Waa inaad ka gudubtaa kantaroolka xadka haddii aad aadid Mareykanka, oo aad isku hubiso fiisooyinka iyo waraaqaha ku habboon. Kudar ugu yaraan hal saac oo dheeri ah xakamaynta xuduudaha.
Adirondacks waa baabuur 2½-saac u socda dhanka koonfurta. Buurahaani waxay ka kooban yihiin jardiinada ugu weyn dalka Mareykanka ee isku xirnaanta waxayna bixiyaan waxqabadyo bannaanka ka ah sida socodka, socodka iyo barafka.
Boston waa 5-saac oo baabuur-wadis ah dhanka koonfur-bari.
Mont-Tremblant waxay ku yaalliin wax ka yar laba saac woqooyi waqooyiga Laurentides.
Tuulooyinka Bariga waa laba ilaa saddex saacadood bariga toosan.
Laurentians -ka iyo Degmooyinka Bariga inta u dhaxaysa Diisambar iyo Maarso waxay bixiyaan baraf baraf leh oo wanaagsan. Waxaa jira Xarumo barafka lagu ciyaaro oo aad u fiican sida Ski Bromont iyo Mont-St-Sauveur.
Magaalada Montérégie, safar gaaban oo bariga Montreal ah.
Magaalada New York waa baabuur waddo 6½-saacad toos ah koonfurta.
Ottawa waa laba saacadood galbeed baabuur.
Magaalada Quebec, oo qiyaastii 3 saacadood woqooyi bari kaga taal Wadada 40, waa ku dhowaad laakiin ma ahan safar maalinle ah. Waxaad ubaahantahay inaad siijoogto, sikastaba.
Tadoussac, oo qiyaastii 6 saacadood u jira baabuur, wuxuu leeyahay daawashada nibiriga weyn
Toronto waa ka fog yahay, laakiin wali waa gaari la qaadan karo oo 6-saac ah (ama safar tareen oo dheereeya 4½-saac).
Baadhitaano Meelo Badan oo Xalaal Kanadiyaan ah
Xalaal Safarka Winnipeg
Xalaal Safarka Whistler
Xalaal Safarka Niagara Falls
Xalaal Safarka Banff
Xalaal Safarka Vancouver
Xalaal Safarka Edmonton
Xalaal Safarka Ottawa
Xalaal Safarka Halifax
Xalaal Safarka Magaalada Quebec
Xalaal Safarka Toronto
Xalaal Safarka Calgary
Dhammaan Suites Deluxe Majestique Downtown Montreal
Madaarka Diyaaradda Aloft Montreal
Hoteelka Auberge Le Pomerol
Hoteelka ugu Fiican Western Plus Montreal Downtown Hotel Europa
Hoteelka Galbeedka Ville Marie ee ugu Fiican & Suites Montreal
Raaxo Inn Aeroport Dorval
Raaxada Inn Montreal Aeroport
Barxadda By Marriott Hotel Montreal Airport
Barxadda Montreal Downtown
Maalmaha Inn & Xarunta Shirka Montreal Airport
Maalmaha Inn Montreal Downtown
Qolalka Safaaradaha Waxaa qoray Hilton Montreal
Hoteelka Espresso & Xarunta Shirarka Montreal
Fairfield Inn & Suites Airport Montreal
Holiday Inn Montreal Aeroport - Madaarka
Holiday Inn Pointe-Claire Airport Montreal
Holiday Inn Xulo Montreal Center Ville Downtown
Hoteelka 7 Saisons
Hoteelka Auberge Manoir Ville Marie
Hoteelka Bon Accueil
Hoteelka Champ-de-mars Montreal
Hoteelka Chateau St Marc Montreal
Huteel Xarago Montreal
Hoteelka Europeenne Montreal
Hoteelka Le Crystal Montreal
Hoteelka Le Prestige Montreal
Hoteelka Le Saint Malo Montreal
Hoteelka Le Saint-Andre Montreal
Hoteelka Maritime Plaza Montreal
Hoteelka Omni Mont-Royal Montreal
Hotel Quartier Laatiin
Hoteelka St Denis Montreal
Hoteelka St. Paul Montreal
Hoteelka Joogitaanka Hoteelka Ville Montreal
Hoteelka Joog Mont Mont Montreal
Hoteelka Ste-Catherine Montreal
Huteelka Kutuma Montreal
Hotelka Le Saint Sulpice Montreal
Le St Martin Hotel Center Ville Montreal
Gegada Diyaaradaha ee Montreal Marriott Hotel
Goobta raaxada ee Montreal
Hoteelka Novotel Center Montreal
Tayo Hotel Dorval Aeroport
Tayada Hotel Downtown Montreal
Tayada Hotel Midtown Montreal
Tayada Hotel Montreal East
Tayada Inn & Suites PE Trudeau Airport Montreal
Tayada Tayada Magaalada Downtown Montreal
Suites Tayada Montreal Aeroport
Xarunta Shirka Ramada Blainville North Montreal Hotel
Hoyga Deggan ee Marriott Montreal Downtown
Hoyga Guriyeynta Marriott Montreal Westmount
Gegada Diyaaradaha Inn Montreal
Gegada Diyaaradaha Rodeway Inn
Sofitel Montreal Dahabka Dahabka ah
Qolalka Springhill Ee Marriott Old Montreal
Hoteelka Travelodge Center Montreal
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal ee Kanada > Xalaal Safarka Montreal
Dalxiiska Palm Island	   
Hagaha Socdaalka Mae Sariang Xalaal